ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်ကိုဘရိတ်နှင့်အရှိန်မြှင့်ခြင်း (၂၀၁၁) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
Braking နှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက် (2011) ၏အရှိန်မြှင့်
J ကို Res မြီးကောင်ပေါက်။ 2011 Mar 1;21(1):21-33.
ကာဇီခ, ဂျုံးစ် RM, Somerville LH.
Developmental Psychobiology Weill အတှကျကော်နဲလ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကောလိပ်, နယူးယောက်, NY USA သို့များအတွက် Sackler Institute မှ။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုမကြာခဏတိုးလာရည်ရွယ်တဲ့ဒဏ်ရာများနှင့်အကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်ပွားမှု, အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု, မရည်ရွယ်သောကိုယ်ဝန်နှင့်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများကိုဦးဆောင်ထကြွလွယ်သောနှင့်အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှုနေတဲ့အချိန်အဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ခုဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော suboptimal ရွေးချယ်မှုနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်ရိုးရာ neurobiological နှင့်သိမြင်မှုရှင်းလင်းချက်ကလေးဘဝနဲ့လူကြီးမှဆွေမျိုးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိအပြုအမူအတွက် nonlinear စသောအပြောင်းအလဲအဘို့အကောင့်ပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုစိတ်ခွန်အားနိုးတွေကိုနှင့်နုသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးတစ်ဦးမြင့် sensitivity ကိုအကြားတစ်ဦးမညီမမျှအဖြစ်, အပြုအမူတွင်ဤ nonlinear ပြောင်းလဲမှုများကိုအခြေခံသည့်ယန္တယားတစ်ခုဇီဝယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်စိတ်ကူးပေးပါသည်။ မကြာသေးမှီကလူ့ပုံရိပ်နှင့်တိရစ္ဆာန်လေ့လာမှုများကလေးဘဝနဲ့လူကြီးဖို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဆွေမျိုးကာလအတွင်းအထက်မှအောက်သို့ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များကိုမှဆွေမျိုး subcortical limbic စနစ်များ differential ကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတအကြံပြုခြင်း, ဒီမြင်ကွင်းကိုများအတွက်ဇီဝအခြေခံသည်။ ဤလုပ်ငန်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်ပျေါလှငျထဲကအနာဂတ်သုတေသန on ရဲ့နည်းလမ်းပေါ်ထွက်လာသို့ဆန်းစစ်အသွင်ကူးပြောင်းမှု၏အရေးပါမှုကိုအလေးပေး အပျိုပေါက် ဦးနှောက် ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။
keywords: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်, ဦးနှောက်, ဖွံ့ဖြိုးရေး, fMRI, အန္တရာယ်, မက်လုံးပေး, သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး, ဆက်သွယ်မှု
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကျနော်တို့လူကြီးများ (သည်အတိုင်းပြုပါထက်ကျနော်တို့ကိုပိုပြီး Impulse ပြုမူသောအခါရေရှည်အကျိုးဆက်များကိုစဉ်းစားရန်ပျက်ကွက်နေတဲ့အချိန်အဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့် riskier အပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေသည်Gardner & Steinberg, 2005; Scott, 1992; Steinberg, et al ။ , 2008) ။ အန္တရာယ်များကိုယူဒါက propensity (မတော်တဆမှု, သတ်သေ, မလုံခြုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များနှင့်ရာဇဝတ်သားလှုပ်ရှားမှုပိုမိုမြင့်မားအဖြစ်အပျက်တွေထဲမှာထင်ဟပ်နေသည်Scott, 1992) ။ Juvenile ပိုပြီး Impulse အဟောင်းတွေမြီးကောင်ပေါက်လုပ်ပေးထက်အသက်အရွယ်ငယ်ရွယ်လုပ်ရပ်၏တဆယ်ငါးနှစ်, ဒါပေမယ့်ပင် sixteen- တဆယ်ခုနစ်နှစ်အရွယ်လူငယ် (Self-ထိန်းချုပ်မှုအရွယ်ရောက်ပြီးသူအဆင့်ဆင့်ပြရန်ပျက်ကွက်Feld, 2008).
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များတွင်သိမြင်မှုနှင့်အ neurobiological ယူဆချက်နံပါတ်မြီးကောင်ပေါက်ထကြွလွယ်သောနှင့်အန္တရာယ်များလုပ်ရပ်များအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံအဘယ်ကြောင့်အဘို့အ postulated ပါပြီ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏ရိုးရာအကောင့်ကသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးစွမ်းရည်၏အဆငျ့ဆငျ့ သာ. ကြီးမြတ်ထိရောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ကာလကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ပုံရိပ်အားဖြင့်သက်သေအဖြစ်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ဒီထိရောက်မှုကို (prefrontal cortex ၏ရငျ့အပေါ်မှီခိုအဖြစ်ဖော်ပြနေသည်သွပ်ရည်စိမ်, et al ။ , 2006; Gogtay, et al ။ , 2004; ယုန်, et al ။ , 2008; Sowell, et al ။ , 2003) နှင့်ရုပ်အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးရာလေ့လာမှုများ post (Bourgeois, Goldman-Rakic, & Rakic, 1994; Huttenlocher, 1979; Rakic, 1994) ကောင်းစွာငယ်ရွယ်လူကြီးသို့ဤဒေသ၏ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးဖေါ်ပြခြင်း။
အဆိုပါ prefrontal cortex (၏ရငျ့နှင့်အတူတိုးတက်လာသောသိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုအထွေထွေပုံစံCrone & ဗန် der Molen, 2007) လူကြီးဖို့ကလေးဘဝထဲကနေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တစ်ဦး linear တိုးအကြံပြုထားသည်။ သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်တစ်ဦးနု prefrontal cortex တစ်ဦးတည်း suboptimal ရွေးချယ်မှုအပြုအမူများအတွက်အခြေခံခဲ့ကြသည်လျှင်, သားတို့သည်မိမိတို့လျော့နည်းဖွံ့ဖြိုးပြီး prefrontal cortex နဲ့သိမြင်မှုစွမ်းရည် (ပေးသော, ဆယ်ကျော်သက်ထက်သိသိသာသာအလားတူသို့မဟုတ်ယူဆရပိုဆိုးကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်Casey, Getz, & Galvan, 2008) ။ သို့သျောလညျးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိ suboptimal ရွေးချယ်မှုနှင့်လုပ်ရပ်များ (ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တစ်ဦးတစ်ခုနဲ့ပက်ပင်းကိုယ်စားပြုWindle, et al ။ , 2008ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူနှင့်သေဆုံးမှုအပေါ်ကျန်းမာရေးစာရင်းအင်းများအတွက်အမျိုးသားစင်တာ (နေဖြင့်သက်သေကဲ့သို့) အကြောင်း, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝသို့မဟုတ်လူကြီးဖြစ်စေထံမှထူးခြားသောဖြစ်ပါသည်Eaton, et al ။ , 2008).
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုဦးနှောက်အန္တရာယ်များအပြုအမူအတွက်အများကိန်းများရှင်းပြစေခြင်းငှါနည်းလမ်းတွေနဲ့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းပြောင်းလဲနေပါတယ်မည်သို့မူလတန်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအမှာစကားပြောကြား။ ကျနော်တို့ subcortical နှင့် cortical ဦးနှောက်ဒေသများအကြားပြောင်းလဲနေသောဆက်စပ်မှုတွေအလေးပေးတဲ့ testable neurobiological မော်ဒယ်ဖျောပွကာဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှုထောင့်ကနေသောဤစနစ်များပေါ်ပေါက်ရေးအပေါ်သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ (စိတ်ခွန်အားနိုးအခင်းအကျင်းအတွက်လုပ်ရပ်များ၏မူဘောင်၌ဤပုံစံကိုထောကျပံ့ဖို့အမူအကျင့်နှင့်လူ့ဦးနှောက်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်အထောက်အထားများကိုCauffman, et al ။ , 2010; Figner, Mackinlay, Wilkening, & Weber, 2009; Galvan, Hare၊ Voss၊ ဂလိုဗာ၊ ၂၀၀၇; သွပ်ရည်စိမ်, et al ။ , 2006) နှင့်အချို့သောဆယ်ကျော်သက်ဆင်းရဲတဲ့ရေရှည်ရလဒ်များမှဦးဆောင် suboptimal ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချဘို့အခြားသူတွေထက် သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်မှာဖြစ်နိုင်ပါသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြေရှင်းရန် (သွပ်ရည်စိမ်, et al ။ , 2007; ယုန်, et al ။ , 2008).
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်၏ Neurobiological မော်ဒယ်
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းသိမြင်မှုနှင့်အ neurobiological ပြောင်းလဲမှုများတစ်ခုတိကျမှန်ကန်စိတ်ကူး (က်ကူးေူပာင်းမြဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလအဖြစ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဆကျဆံရပါမည်လှံ, 2000), အစားအချိန်အတွက်တစ်ခုတည်းလျှပ်တစ်ပြက်ထက်။ တစ်နည်းသို့အသွင်ကူးပြောင်းမှု characterizing, ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးကာလကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ထဲက (ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဤကာလ၏ကွဲပြား attribute တွေကွဲပြားခြားနားသွားဘို့လိုအပ်သောများမှာကာဇီ, Galvan, & Hare, 2005; Casey, Tottenham, Liston, & Durston, 2005) ။ သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များအဘို့အဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာထူထောင်သောဤအကူးအပြောင်း characterizing နှင့်ဤကာလအတွင်းအပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့် ပတ်သက်. အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူအတားအဆီးအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။
ကျနော်တို့ကြွက်မော်ဒယ်များအပေါ်တည်ဆောက်သောဤမူဘောင် (အတွင်းဆယ်ကျော်သက်ရွယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တစ်ဦး testable neurobiological မော်ဒယ်တီထွင်ခဲ့ကြBrenhouse, Sonntag, & Andersen, 2008; Laviola, Adriani, Terranova, & Gerra, 1999; လှံ, 2000) နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏မကြာသေးမီပုံရိပ်လေ့လာမှုများ (Ernst, et al ။ , 2005; သွပ်ရည်စိမ်, et al ။ , 2007; သွပ်ရည်စိမ်, et al ။ , 2006; ယုန်, et al ။ , 2008; စာနယ်ဇင်းအတွက် Somerville, Hare, & ကာဇီ; ဗန် Leijenhorst, Moore, et al ။ , 2010; ဗန် Leijenhorst, Zanolie, et al ။ , 2010). ပုံ 1 ဒီ model သရုပ်ဖော်သည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏ဤစရိုက်လက္ခဏာတွေဟာ prefrontal cortex ၏ကျက်ဖို့အန္တရာယ်များအပြုအမူ၏သီးသန့်အသင်းအဖွဲ့ကျော်လွန်တတ်၏။ ယင်းအစားအဆိုပြုထား neurobiological မော်ဒယ်အတူတကွထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်ကိုဘယ်လို subcortical နှင့် cortical အထက်မှအောက်သို့ထိန်းချုပ်မှုဒေသများဖော်ပြသည်။ အဆိုပါကာတွန်းထိုကဲ့သို့သောအစောပိုင်းက prefrontal ထိန်းချုပ်မှုဒေသများထက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲအဆိုပါ ventral striatum အဖြစ် subcortical စနစ်များနှင့်အတူဤစနစ်များများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာဖော်ပြသည်။ ဒီ model အရ, တစ်ဦးချင်းစီသည်ဤစနစ်များ (ဆိုလိုသည်မှာ subcortical နှင့် prefrontal) နှစ်ဦးစလုံးတုန်းပဲဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ကြောင်းအဘယ်သူကိုများအတွက်ကလေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (cortical ထိန်းချုပ်မှု prefrontal မှ subcortical ဆွေမျိုးများ၏ဆိုလိုသည်မှာမညီမမျှ), စဉ်အတွင်း function ရင့်ကျက် subcortical ဒေသများအားဖြင့်ပိုပြီး biased ဖြစ်ပါတယ် ဤစနစ်များကိုအပြည့်အဝရင့်ကျက်ဖြစ်ကြအကြင်အဘို့အရွယ်ရောက်မှနှိုင်းယှဉ်။
အလိုဆန္ဒနှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်း၌ပါဝင်ပတ်သက် subcortical ဒေသများမှဆွေမျိုးထိပ်တန်းချ prefrontal ဒေသအကြာတွင်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတသရုပ်ဖော်ထားတဲ့ Neurobiological မော်ဒယ်။ ဤအမှုစနစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဒီအချိုးမညီမျှမှုမြီးကောင်ပေါက်အတွက်အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှုအပြုအမူ၏အဓိကမှာဖြစ်အဆိုပြုထားတာဖြစ်ပါတယ် ...
ဤသည်ရှုထောင့်ကြောင့်လျော့နည်းရင့်ကျက်ထိပ်တန်းချ prefrontal ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များကိုမှဆွေမျိုး subcortical စနစ်များအစောပိုင်းကရငျ့မှ, ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဖြတ်ပြီးအန္တရာယ်များအပြုအမူအတွက် nonlinear ဆိုင်းများအတွက်အခြေခံပေးပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူဤဒေသများအကြား functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု (ဒီ circuitry ထိပ်ကဆင်းထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုယန္တရားကိုထောက်ပံ့ပေးယုန်, et al ။ , 2008) ။ ထို့ပြင်မော်ဒယ်မြီးကောင်ပေါက်ဆင်ခြင်တုံတရားဆုံးဖြတ်ချက်များ၏အတော်လေးနိုင်စွမ်းဖြစ်ကြပြီးသူတို့ထိတွေ့ဆက်ဆံရသောအပြုအမူ၏အန္တရာယ်များကိုနားလည်ကြောင်း Reyna နှင့် Farley (2006) အားဖြင့်လာဘ်လေ့လာရေးအတူမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအန္တရာယ်များအပြုအမူ၏ကျန်းမာရေးစာရင်းဇယားများ၏ဆန့်ကျင်သင့်မြတ်။ သို့သော်စိတ်ခံစားမှုအဓိကအခြေအနေတွေမှာ, subcortical စနစ်များ prefrontal ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဆွေမျိုးသူတို့ရဲ့ရင့်ကျက်ပေးထားထိန်းချုပ်မှုစနစ်များကိုကျော် (ဘရိတ်) (accelerator) ထွက်အနိုင်ရပါလိမ့်မယ်။
ဒါကမော်ဒယ် (ဆယ်ကျော်သက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏မော်ဒယ်များနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်Ernst, ထင်းရှူး, & Hardin, 2006; Ernst, Romeo, & Andersen က, 2009; Geier & Luna, 2009; နယ်လ်ဆင်, Leibenluft, McClure, & ထင်းရူး, 2005; Steinberg, 2008; Steinberg, et al ။ , 2009) ထို subcortical နှင့် cortical ဒေသ differential ကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဥပမာ, triadic မော်ဒယ် Ernst နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (နေဖြင့်အဆိုပြုErnst, et al ။ , 2006) သုံးခုကွဲပြားအာရုံကြောဆားကစ် (ချဉ်းကပ်မှု, ရှောင်ရှားခြင်းနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း) ရှိခြင်းအဖြစ်လှုံ့ဆော်အပြုအမူဖော်ပြသည်။ အဆိုပါချဉ်းကပ်မှုစနစ်ကအပြုအမူတွေကိုဆုချဖို့ပြောပြတယ်နှင့်အကြီးအကျယ် ventral striatum ကထိန်းချုပ်ထားသည်။ အဆိုပါရှောင်ရှားခြင်းစနစ်အအပြုအမူတွေ avoidance မှပြောပြတယ်နှင့်အများအားဖြင့် amygdala ကထိန်းချုပ်ထားသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့, ထိုစည်းမျဉ်းစနစ်ချဉ်းကပ်မှုနှင့်ရှောင်ရှားခြင်းစနစ်များကိုထိန်းညှိကစားများနှင့်အကြီးအကျယ် prefrontal cortex ကထိန်းချုပ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအပြုအမူယူပြီးတိုးမြှင့်အန္တရာယ်ချဉ်းကပ်မှုစနစ်နှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းစနစ်၏တစ်ဦးအားနည်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုပိုမိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်ဦးနှောက်အဘို့ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားများအပေါ်အခြေခံပြီးကြောင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏မော်ဒယ်လူကြီးဖို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကနေအကူးအပြောင်း၌မသာပြောင်းလဲပေမယ့်လည်းငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကနေမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သို့အကူးအပြောင်းအခြားသူများထံမှကွဲပြားနေသည်။ ထို့ပြင်ကျွန်တော်တို့ (striatum နှင့် amygdala ကဤအဆောက်အဦများ၏ valence လွတ်လပ်ရေးဖေါ်ပြခြင်းမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများပေးထားချဉ်းကပ်မှုနှင့်ရှောင်ရှားရန်အပြုအမူမှတိကျတဲ့ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုကြဘူးLevita, et al ။ , 2009), ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲသူတို့လုပ်နိုင်တဲ့ဘက်လိုက်မှုအပြုအမူကြောင့် motivationally နှင့်စိတ်ခံစားမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်သက်ဆိုင်ရာတွေကိုဖော်ထုတ်မယ်အတွက်အရေးကြီးသောစနစ်များဖြစ်ကြောင်း။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအစာစားချင်စိတ်များနှင့် Emotion တွေကိုရန်ဤ sensitivity ကိုမျိုးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီးဖော်ပြထားခဲ့ပြီး (ကြည့်ရှု လှံ, 2009) နှင့်ကဒီမှာပြန်လည်သုံးသပ်သည်။
ဦးနှောက်ကဒီလမ်းအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အစီအစဉ်စေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏မညီမမျှပုံစံကနေပေါ်ထွက်လာတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ ဤမေးခွန်းကိုနောက်ပြန်ခြေလှမ်းယူပြီးနှင့်ကလေးဘဝနဲ့လူကြီးအကြား်ကူးေူပာင်းမြဆိုင်ရာကာလအဖြစ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏အဓိပ္ပါယ်စဉ်းစားခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။ အပျိုဖော်ဝင် (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျ့၏စနှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စတင်ခြင်းခြေတစ်လှမ်းGraber & Brooks-Gunn, 1998) နှင့်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအမှတ်အသားများအားဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ်ဦး nebulous ontogenetic အချိန်သင်တန်းနှင့်အတူလူကြီးသို့တိုးတက်သောအကူးအပြောင်းအဖွစျဖျောပွနိုငျ (လှံ, 2000, p.419) ။ ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူအပေါ် pubertal ဟော်မုန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများတစ်ဦးကပြီးပြည့်စုံသောဆွေးနွေးမှုဤစာတမ်း၏အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်လျက်ရှိ၏ (ကြည့်ရှုForbes & Dahl, 2010; Romeo, 2003) ကိုဘာသာရပ်အပေါ်အသေးစိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်။
Evolutionarily စကားပြော, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (တစ်ပြိုင်နက်ပျက်ဆီးလမ်းအတွက်တစ်ဦးချင်းစီသွင်းထားရသောမိသားစုများ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကနေလွတ်လပ်ရေးရရှိမှုတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်Kelley, Schochet, & Landry, 2004) ။ လွတ်လပ်မှုရှာဖွေခြင်းအပြုအမူများကိုနို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များတွင်တွေ့မြင်ရပြီးသက်တူရွယ်တူများထံမှလူမှုရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများတိုးပွားလာခြင်းနှင့်အသစ်အဆန်းရှာဖွေခြင်းတွင်ပိုမိုပြင်းထန်လာခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏အန္တရာယ်ရှိသောအပြုအမူအပေါ် မူတည်၍ အကျိုးသက်ရောက်စေသည် (ဘရောင်း, 2004; Chassin, et al ။ , 2004; Collins & Laursen, 2004; Laviola, et al ။ , 1999) ။ ဤသည်အန္တရာယ်များအပြုအမူ (နု "Self-စည်းမျဉ်းအရည်အချင်းကို" နှင့် တွဲဖက်. တိုးမြှင့်အသစ်အဆန်းများနှင့်အာရုံခံစားမှုရှာကြံအကြားဇီဝမောင်းနှင်မညီမမျှ၏ထုတ်ကုန်အဖြစ်သတ်မှတ်စေခြင်းငှါSteinberg, 2004) ။ ထင်ကြေး (ဒီဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပုံစံတစ်ဦးချင်းတစ်ဦးအိမ်ထောင်ဖက်ရှာသည်ဆက်လက်တိုးပွားနိုင်ရန်အတွက်လုံခြုံပြီးအကျွမ်းတဝင်နယ်ပယ်မှထွက်ခွာ High-အန္တရာယ်အပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုတစ်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အင်္ဂါရပ်ကြောင်းအကြံပြုမယ်လို့လှံ, 2000) ။ ထို့ကြောင့်စွန့်စားမှုကိုယူခြင်းသည်ဟော်မုန်းများသည်ဆယ်ကျော်သက်များအားလိင်ဆက်ဆံဖက်များရှာဖွေရန်မောင်းနှင်သည့်အချိန်နှင့်တိုက်ဆိုင်နေသည်။ မိဘများနှင့်နေထိုင်သော၊ ငွေရေးကြေးရေးမှီခိုရပြီးနောက်ပိုင်းတွင်အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အတူဤလူ့ဘောင်တွင် - မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သည်အကန့်အသတ်မရှိသက်တမ်းတိုးနိုင်သည် - ကျွန်ုပ်တို့၏ neurobiological မော်ဒယ်က၎င်းသည် subcortical နှင့် cortical systems ၏ differential development မှတဆင့်ဖြစ်ပေါ်သည်ဟုဆိုသည်။ ပင်ကိုယ်မူလအပြုအမူနှင့်ပုံရိပ်အချက်အလက်များကိုဤအမြင်ကိုထောက်ခံသည်။
အမူအကျင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တစ်ဦးကအဓိကအစိတ်အပိုင်းအထူးသဖြင့်ဆွဲဆောင်မှုမက်လုံး၏ရှေ့မှောက်တွင်အတွက်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားထားသောသူတို့၏မျက်နှာသာအတွက်မသင့်လျော်လုပ်ရပ်တွေကိုနှိမ်နင်းရန်စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်စွမ်းရည်ကိုပုံမှန်အားဖြင့် (သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအဖြစ်ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ကာဇီ, သွပ်ရည်စိမ်, et al ။ , 2005; Casey, Giedd, & သောမတ်စ်, 2000; ကာဇီ, သောမတ်စ်, et al ။ , 2000) ။ ကျနော်တို့အသက်အရွယ်နှင့်အတူ cortical မောင်းနှင်သိမြင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အပြောင်းအလဲများအခြေအနေတွင်ဂန္သိမြင်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်အန္တရာယ်များအပြုအမူတွေကနေသူ့ရဲ့ဂုဏ်ထူးများအတွက်အမူအကျင့်များနှင့် neuroanatomical သက်သေအထောက်အထားသည်။
ဂန္ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုတစ်ဦးကအရေအတွက်အားသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (လျှောက်လုံးဖွံ့ဖြိုးကြောင်းပြသကြဖြစ်ရပ်မှန်, 1972; Flavell, သဲသောင်ပြင်, & Chinksy, 1966; Keating & Bobbitt, 1978; Pascual-Leone, 1970) ။ အများအပြားကသဘောတရားပညာရှင်တွေရဲ့ဒီဖှံ့ဖွိုးတိုးတအပြောင်းအလဲနဲ့အမြန်နှုန်းနှင့်ထိရောက်မှု (ဥပမာ, (အတွင်းတိုးမှုကြောင့်ကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့ကြBjorklund, 1985, 1987; ဖြစ်ရပ်မှန်, 1972)), ဒါပေမယ့်အခြားသူတွေ "inhibitory" လုပ်ငန်းစဉ်များအကြံပြုခဲ့ကြ (သော့ချက်အချက်များမှာHarnishfeger & Bjorklund, 1993) ။ ဒီအကောင့်အဆိုအရငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက် suboptimal ရွေးချယ်မှု (နှိမ်နင်းရမည့်သတင်းရင်းမြစ် (ဥပမာယှဉ်ပြိုင်ရာမှဝင်ရောက်စွက်ဖက်ဖို့ သာ. ကြီးမြတ်လွယ်ကူစွာထိခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းBrainerd & Reyna, 1993; ကေးစီ၊ သောမတ်စ်၊ ဒေးဗစ်ဆန်၊ ကွန်းဇ်နှင့်ဖရန့်ဇန်၊ ၂၀၀၂; Dempster, 1993; စိန်, 1985; Munakata & Yerys, 2001) ။ ထို့ကြောင့်အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း (Impulses သတင်းပို့၏ထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ပါတယ်Mischel, Shoda, & Rodriguez, 1989) နှင့်ဒီစွမ်းရည် (ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးတစ် linear ဖက်ရှင်အတွက်ရင့်ကျက်Eigsti, et al ။ , 2006).
ဆနျ့ကငျြ, အပြုအမူတွေကိုရှာကြံအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေသို့မဟုတ်ဆုလာဘ်, (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိပြီးတော့လူကြီးအတွက်ကျဆင်းဟန်Eaton, et al ။ , 2008; Windle, et al ။ , 2008) နှင့်အပျိုဖော်ဝင်ရငျ့နှင့်ဆက်စပ်နေကြသည် (Dahl, 2004; မာတင်, et al ။ , 2001) ။ အားဖြင့်တစ်ဦးကမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှု Steinberg et al ။ (2008) ဝတ္ထုအတွေ့အကြုံများထွက်ရှာအံ့သောငှါသူတို့ကိုအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာအန္တရာယ်များကိုယူပြီးဖို့ဆန္ဒအဖြစ်သတ်မှတ်အပြုအမူတွေကိုရှာကြံအာရုံခံစားမှုကနေအရင်းခံတွန်းအား / သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး၏ဆောက်လုပ်ရေး delineated ။ သူတို့ဟာ 10 နှင့် 30 ၏အသက်အရွယ်အကြားတစ်ဦးချင်းစီကိုစမ်းသပ်နှင့်အသက်အရွယ်နှင့်အတူရှာကြံအာရုံခံစားမှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုအာရုံထဲမှာထိပ် 10 နှင့် 15 နှစ်အကြားတိုးပွားလာခြင်းနှင့်ကျဆင်းနေသို့မဟုတ်အဲဒီနောက်တည်ငြိမ်ကျန်ရှိသောရှာကြံနှင့်အတူတစ် curvilinear ပုံစံနောက်တော်သို့လိုက်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဆနျ့ကငျြ, Impulse အတွက်အသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှုအသက်အရွယ်နှင့်အတူ Impulse လျော့ကျလာနှင့်အတူတစ် linear ပုံစံနောက်သို့လိုက်ကြ၏။
ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်နှစ်ခုဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ကွဲပြားဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာလဲအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အထူးသ Impulse (ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးအသက်နှင့်အတူမှေးမှိန်ကာဇီ, သွပ်ရည်စိမ်, et al ။ , 2005; ကာဇီ, သောမတ်စ်, et al ။ , 2002; သွပ်ရည်စိမ်, et al ။ , 2007), ပေးထားသောတစ်ဦးချင်းထကြွလွယ်သောပင်ဖြစ်သည်သို့မဟုတ်မ, မခွဲခြားဘဲအသက် (ရသောဖို့ဒီဂရီအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်ပေမယ့်Eigsti, et al ။ , 2006) ။ / သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး impulse မတူဘဲ, အာရုံခံစားမှုရှာကြံ / အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေကလေးဘဝနှင့်လူကြီး (ရန်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဆွေမျိုးကာလအတွင်းတစ်ဦးတိုးနှင့်အတူတစ် curvilinear ပုံစံကိုပြသပုံပေါ်Cauffman, et al ။ , 2010; Figner, et al ။ , 2009; သွပ်ရည်စိမ်, et al ။ , 2007) ။ အောက်ပါကဏ္ဍများအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မည်ကဲ့သို့ပင်ဤတွေ့ရှိချက်များ (ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အပြုအမူဆွေမျိုးယူပြီးအန္တရာယ်များ၏အစောပိုင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးအတူချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်များအတွက်အာရုံကြောစနစ်ကနေမခွဲထွက်, အန္တရာယ်များအပြုအမူများဆောက်လုပ်ရေးအတွက်တစ်ဦးကွဲပြားအာရုံကြောစနစ်ကအကြံပြုသွပ်ရည်စိမ်, et al ။ , 2007; Steinberg, et al ။ , 2008).
ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏မကြာမီကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုအလွယ်တကူလူ့လူဦးရေဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်အတူအသုံးပြုရနိုင်သော neuroimaging နည်းစနစ်များတွင်တိုးတက်မှုအပေါ်အခြေခံထားသည်။ ဤရွေ့ကားနည်းလမ်းများသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (MRI) နည်းလမ်းတွေအပေါ်အားကိုးနှင့်ပါဝင်သည်: အဆောက်အဦများ၏အရွယ်အစားနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုသည့်အခြေခံအဆောက်အဦး MRI, ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုပုံစံများကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုသည်ဖြစ်သော functional MRI (fMRI); အဖြူကိစ္စဖိုင်ဘာဝစော၏အညွှန်းကိန်းဆက်သွယ်မှုအသုံးပြုသည်အရာနှင့်ပျံ့နှံ့ tensor ပုံရိပ် (DTI) ။ cortical နှင့် subcortical ဒေသများအကြားယှဉ်ပြိုင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမော်ဒယ်သက်သေအထောက်အထားအသီးသီး DTI နှင့် fMRI ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်နုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်ဆက်သွယ်မှုကထောက်ခံသည်။
လူ့ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု MRI လေ့လာရေး
အများအပြားကလေ့လာမှုများ (ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ရှု (ပုံမှန်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ခန္ဓာဗေဒသင်တန်း map မှဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ MRI ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြကာဇီ, စပါး, et al ။ , 2005)) ။ စုစုပေါင်းဦးနှောက်အရွယ်အစားအသက်အရွယ်ခြောက်လဖြင့်၎င်း၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူအရွယ်အစားခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 90% ဖြစ်သော်လည်းဦးနှောက်၏မီးခိုးရောင်ဖြူကိစ္စ subcomponents မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ်လျှောက်လုံးပြောင်းလဲနေသောအပြောင်းအလဲများခံယူဖို့ဆက်လက်။ မကြာသေးမီ longitudinal MRI လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ဒေတာများ (အဖြူကိစ္စထက် သာ. ကြီးမြတ်ဒေသဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနှင့်အတူ, မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်တစ်ဦးပြောင်းပြန်လှန်ဦး-ပုံသဏ္ဍာန်ပုံစံရှိတယ်ဆိုတာညွှန်ပြGiedd, 2004; Gogtay, et al ။ , 2004; Sowell, et al ။ , 2003; Sowell, Thompson က, & Toga, 2004) ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောမော်တာများနှင့်အာရုံခံစနစ်များအဖြစ်မူလတန်း functions များ, subserving ဒေသများ, အစောဆုံးရင့်ကျက်; ဤအမူလတန်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ Higher-အလို့ငှာအသင်းအဖွဲ့ဒေသများ, (နောက်ပိုင်းရင့်ကျက်Gogtay, et al ။ , 2004; Sowell, et al ။ , 2004) ။ ဥပမာအားဖြင့်, MRI-based အစီအမံကို အသုံးပြု. လေ့လာမှုများ cortical မီးခိုးရောင်ကိစ္စအရှုံးမူလတန်း sensorimotor ဒေသများရှိအစောဆုံးတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်နှင့် dorsolateral prefrontal နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ယာယီ cortical (များတွင်နောက်ဆုံးပေါ်ကြောင်းပြသGogtay, et al ။ , 2004) ။ ဒီပုံစံကို (prefrontal cortex ရင့်ကျက်ဖို့နောက်ဆုံးဦးနှောက်ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်း nonhuman မျောက်နှင့်လူ့ postmortem လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်Bourgeois, et al ။ , 1994; Huttenlocher, 1979) subcortical နှင့် sensorimotor ဒေသများရှိရာသို့အလျင်အမြန်ဖွံ့ဖြိုးနေစဉ်။ မီးခိုးရောင်ကိစ္စမှမတူဘဲတစ်အကြမ်းဖျင်း linear ပုံစံထဲမှာအဖြူကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်တိုး, ကောင်းစွာလူကြီးသို့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတလျှောက်လုံးတိုးမြှင့ (Gogtay, et al ။ , 2004) ။ ဤပြောင်းလဲမှုများယူဆရသည်သက်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှု၏အာရုံခံ conduction နှင့်ဆက်သွယ်ရေးတိုးမြှင့် oligodendrocytes အားဖြင့် axon ၏ဖြစ်ပွားနေသော myelination ရောင်ပြန်ဟပ်။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာလျော့နည်းအာရုံကို subcortical ဒေသများခံရပြီဖြစ်သော်လည်း, ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဖြတ်ပြီးဦးနှောက်ထဲမှာအကြီးဆုံးအပြောင်းအလဲများကိုအချို့ (ဥပမာ striatum အဖြစ် Basal ganglia ၏ဝေမျှတွင်တွေ့မြင်နေကြSowell, Thompson က, ကေတီဟုမ်း, Jernigan, & Toga, 1999), အထူးသဖြင့်အမျိုးသားများအတွက် (Giedd, et al ။ , 1996) ။ Basal ganglia နှင့် prefrontal ဒေသများအတွင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအသံအတိုးအကျယ်တွင်ဤဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို (cortical ဆက်သွယ်မှုကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသောအာရုံကြောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ (ဥပမာ dendritic Arbore, ဆဲလ်အသေခံ, Synaptic တံစဉ်များကို, myelination) နဲ့ကိုက်ညီပိုပြီးသန့်စင်ပြီးဖြစ်လာဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုHuttenlocher, 1979) ။ ဤရွေ့ကားဖြစ်စဉ်များ ( သာ. ကြီးမြတ်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်စေခြင်းငှါသင်ယူမှု (ဥပမာ, အပြုအမူထိန်းညှိဖို့ prefrontal ထိန်းချုပ်မှုဒေသများအချက်ပြ) နဲ့ prefrontal နှင့် subcortical ဒေသများအကြားဆက်သွယ်မှု၏ဒဏ်ငွေ-tuning နှင့်ခိုင်မာဘို့ခွင့်ပြုCasey, Amso, & Davidson, 2006; ကာဇီ & Durston, 2006).
ဒါဟာအပြုအမူအပြောင်းအလဲများဆက်စပ်အတိအကျဘယ်လိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုမရှင်းလင်းသည်။ အနည်းငယ်လေ့လာမှုများ neuropsychological အစီအမံ (ဥပမာ, ( အသုံးပြု. MRI-based ထုထည်ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုနှင့်သိမြင်မှု function ကိုအကြားသွယ်ဝိုက်အသင်းအဖွဲ့များပြခဲ့ကြကာဇီ, Castellanos, et al ။ , 1997; Sowell, et al ။ , 2003)) ။ အထူးသအသင်းအဖွဲ့များ ((MRI-based prefrontal cortical နှင့် Basal ganglia ဒေသဆိုင်ရာ volumes ကိုနှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုအစီအမံများအကြားအခြားများ၏မျက်နှာသာအတွက်တစ်ဦးမသင့်လျော်ရွေးချယ်မှု / action ကိုပယ်ဖျက်ဖို့ဆိုလိုသည်မှာနိုင်စွမ်းအစီရင်ခံခဲ့ကြကာဇီ, Castellanos, et al ။ , 1997()ကာဇီ, Trainor, et al ။ , 1997)) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်သိမြင်အပြောင်းအလဲများကိုဦးနှောက်အတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများတွင်ထင်ဟပ်နှင့် subcortical (striatum) ၏အရေးပါမှုအဖြစ် cortical (ဥပမာ prefrontal cortex) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ underscore ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
လူ့ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု DTI လေ့လာရေး
ပြန်လည်သုံးသပ်အဆိုပါ MRI-based morphometry လေ့လာမှုများ cortical ဆက်သွယ်မှု synapses နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှု၏အားကောင်းတစ်ခု overabundance ၏ဖျက်သိမ်းရေးနှင့်အတူဒဏ်ငွေ-ညှိလျက်ရှိသည်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ DTI တူသော MRI နည်းပညာမကြာမီကတိုးတက်လာတိကျတဲ့အဖြူကိစ္စဝေစာတွေကိုနှင့်အပြုအမူ၎င်းတို့၏စပ်လျဉ်း၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမော်ဂျူဆန်းစစ်များအတွက် tool ကိုပေး။ တဦးတည်းလေ့လာမှုများတွင်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အပြုသဘော (prefrontal-parietal ဖိုင်ဘာဝစောဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်Nagy, Westerberg, & Klingberg, 2004) မှဆွေမျိုးသားသမီးများတွင်ဤဒေသ differential ကိုစုဆောင်းဖေါ်ပြခြင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်း (Klingberg, Forssberg, & Westerberg, 2002).
အလားတူချဉ်းကပ်အသုံးပြုခြင်း, Liston နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2006) လူကြီးသို့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကိုဖြတ်ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆက်လက်ထားတဲ့ frontostriatal ဆားကစ်အတွက်အဖြူကိစ္စဝေစာတွေကို၏အစွမ်းသတ္တိကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ frontostriatal ဖိုင်ဘာဝစော (တူညီသောတာဝန်သုံးပြီးတစ်ဦး fMRI လေ့လာမှုမှာဖော်ထုတ်နှစ်ယောက် striatum အတွက်အကျိုးစီးပွားဒေသများနှင့် ventral prefrontal cortex ချိတ်ဆက်ပြီးသတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်Durston, သောမတ်စ်, Worden, ယန်, & Casey, 2002; Epstein, et al ။ , 2007) ။ ဤအဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ DTI လေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီး, တစ်ခုလုံးကိုဦးနှောက်ကိုဖြတ်ပြီးဖိုင်ဘာကျေးရွာအုပ်စုအစီအမံဖှံ့ဖွိုးတိုးတဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်။ သို့သော်အထူးသဖြင့်ဖိုက်ဘာဝေစာတွေကိုသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြသည့်အတွက်တိကျသော (ရှိခဲ့ကာဇီ, et al ။ , 2007; Liston, et al ။ , 2006) သို့မဟုတ်သိမြင်မှုစွမ်းရည် (နက်ဂျီ et al ။ , 2004) ။ တစ်ဦးသွားလာရင်း / nogo တာဝန်အပေါ်စွမ်းဆောင်မှုဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်အထူး frontostriatal ဆက်သွယ်မှုအစွမ်းသတ္တိကိုအပြုသဘော (ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်စွမ်းရည်ဟောကိန်းထုတ်ကာဇီ, et al ။ , 2007; Liston, et al ။ , 2006) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ကိုသာဒေသဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုဆန်းစစ်၏အရေးပါမှုကို underscore, ဒါပေမယ့်လည်းသိမြင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အာရုံကြောအလွှာ၏အသက်အရွယ်-မှီခိုရငျ့အကြောင်းကိုတောင်းဆိုမှုများအောင်သည့်အခါနှင့်ဆက်စပ်သောအပြောင်းအလဲများ circuitry ။
အပြုအမူများနှင့်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု functional MRI လေ့လာရေး
MRI နှင့် DTI ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းအပြုအမူအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့ကြပေမယ့်, ဖွဲ့စည်းပုံ-function ကိုအသင်းအဖွဲ့များဆန်းစစ်ဘို့ပိုပြီးတိုက်ရိုက်ချဉ်းကပ် fMRI နှင့်ဝသကဲ့သို့, တစ်ပြိုင်နက်ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူများတွင်အပြောင်းအလဲများတိုင်းတာရန်ဖြစ်ပါသည်။ MRI နှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်ထဲမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုများကိုတိုင်းတာရန်စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသိပ္ပံ၏လယ်ပြင်များအတွက်အရေးပါသောအလားအလာရှိပါတယ်။ လက်ရှိဆောင်းပါး၏ဆက်စပ်ခုနှစ်, fMRI ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူအတားအဆီးတစ်ခုနည်းလမ်းများပေးပါသည်။ ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့, prefrontal cortex ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုထိုကဲ့သို့သောဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက် oriented ရွေးချယ်မှုအပြုအမူ (အဖြစ်ပိုမိုမြင့်မားသိမြင်မှုစွမ်းရည်များရငျ့အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှယုံကြည်Casey, Tottenham, & Fossella, 2002; ကာဇီ, Trainor, et al ။ , 1997) ။ အတော်များများက Paradigm သည်ဤအရည်အချင်းများ၏ neurobiological အခြေခံအကဲဖြတ်ရန်အတူတကွ fMRI အတူအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကား Paradigm သင်တန်းသားများကိုတုံ့ပြန် ((သင်တန်းသားများကိုတဦးတည်းလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်ပေမယ့်ဒုတိယစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုမှတုံ့ပြန်မှုဖိနှိပ်ရမယ်), nogo / go Flanker (သင်တန်းသားများကိုပစ်မှတ်နှင့်သဟဇာတသို့မဟုတ်သဟဇာတဖြစ်စေဖြစ်ကြောင်းသင်္ကေတများကဝိုင်းတစ်ပစ်မှတ်၏ directionality ကိုရှေးခယျြ), signal ကိုရပ်တန့်တို့ပါဝင်သည် အဖြစ်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုမှတတ်နိုင်သမျှအစာရှောင်သော်လည်း, သူတို့သည်ထိုသို့သောအာရုံသေံအဖြစ်မှတ်တိုင် signal ကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါဤအတုံ့ပြန်မှုဖိနှိပ်ရမယ်), နှင့် antisaccade တာဝန်များကို (သင်တန်းသားများကို) ပစ်မှတ်၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်ကြည့်ရှုတတ်ဖို့ reflex မျက်စိလှုပ်ရှားမှုများကိုတားစီးရမယ် (Bunge, Dudukovic, Thomason, Vaidya, & Gabrieli, 2002; ကာဇီ, Giedd, et al ။ , 2000; ကာဇီ, Trainor, et al ။ , 1997; Durston, et al ။ , 2003; Luna, et al ။ , 2001) ။ စုပေါင်းဤလေ့လာမှုများသည်ဤတာဝန်များကိုဖျော်ဖြေတဲ့အခါမှာကလေးတွေအရွယ်ရောက်လုပ်ပေးထက်ကွဲပြားပေမယ့်မကြာခဏပိုကြီးပိုပျံ့ prefrontal ဒေသများစုဆောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ (သိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူပတျသကျကြောင်းဆိုလိုသည်မှာ,) တာဝန်စွမ်းဆောင်ရည်မှဗဟိုဦးနှောက်ဒေသများအတွင်းလှုပ်ရှားမှုများ၏ပုံစံကိုပိုမို focal သို့မဟုတ်အသက်အရွယ်နှင့်အတူဒဏ်ငွေ-ညှိဖြစ်လာ; တိုင်းဒေသကြီးများအသက်အရွယ်နှင့်အတူလှုပ်ရှားမှုအတွက်တာဝန်စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းလာဆက်နွယ်နေကြောင်းမဟုတ်နေစဉ်။ ဒီပုံစံ (နှစ်ဦးစလုံး Cross-Section ကိုဖြတ်ပြီးလေ့လာတွေ့ရှိထားသည်ဘရောင်း, et al ။ , 2005) နှင့် longitudinal လေ့လာမှုများ (Durston, et al ။ , 2006) နှင့် Paradigm အမျိုးမျိုးကိုဖြတ်ပြီး။
neuroimaging လေ့လာမှုများနှင့်အဓိပ္ပါယ်ထိုကဲ့သို့သောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို (ဥပမာ dendritic Arbore, Synaptic တံစဉ်များကို) ၏ယန္တရားရဲ့အနှစ်သာရကမနိုင်ပေမယ့်တွေ့ရှိချက်အတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုရောင်ပြန်ဟပ်နှင့်ရငျ့နှင့်အတူ activated ဦးနှောက်ဒေသများနှင့်ထံမှပရိုဂျက်၏သနျ့စ။ ထို့ပြင်တွေ့ရှိချက် (ဤ neuroanatomical ပြောင်းလဲမှုများကိုအချိန်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအကြံပြုဘရောင်း, et al ။ , 2005; Bung, et al ။ , 2002; ကာဇီ, သောမတ်စ်, et al ။ , 2002; ကာဇီ, Trainor, et al ။ , 1997; Crone, Donohue, Honomichl, Wendelken, & Bunge, 2006; Luna, et al ။ , 2001; မောရှေ, et al ။ , 2002; Schlaggar, et al ။ , 2002; Tamm, Menon, & Reiss, 2002; သောမတ်စ်, et al ။ , 2004; Turkeltaub, Gareau, ပန်း, Zeffiro, & enဒင်, 2003).
ဒီနည်းစနစ်ဆယ်ကျော်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်များအမှန်ပင်ထကြွလွယ်သောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်များရှိမရှိအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကြားနိုင်သလဲ ထိုကဲ့သို့သောသွားလာရင်း / nogo တာဝန်အဖြစ်တာဝန်များကိုဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ် Impulse ထိန်းချုပ်မှုအထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တစ်ဦး linear ပုံစံကိုပြသ။ သို့သော်မကြာသေးမီ neuroimaging လေ့လာမှုများ (ဆယ်ကျော်သက်အတွက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေမှသက်ဆိုင်ရာဆုလာဘ်-related အပြောင်းအလဲနဲ့ဆနျးစစျဖို့စတင်ပါပြီBjork, et al ။ , 2004; Ernst, et al ။ , 2005; သွပ်ရည်စိမ်, et al ။ , 2005; မေလ, et al ။ , 2004; ဗန် Leijenhorst, Moore, et al ။ , 2010) ။ ဒီလေ့လာမှုတွေက, အ ventral striatum ရဲ့ဒေသအပေါ်အဓိကအားဆုလာဘ်ရလဒ်များသင်ယူခြင်းနှင့်ခန့်မှန်းအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရတစ်ဒေသအာရုံစူးစိုက်ကြပါပြီ။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များတွင်တွေကို Appetitive မှ sensitivity
ကျွန်ုပ်တို့၏ neurobiological မော်ဒယ်အမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးတွေကိုနှင့်ကျက်ဖို့မြင့်တုန့်ပြန်၏ပေါင်းစပ်ဘက်လိုက်မှုမြီးကောင်ပေါက်ကိုချက်ချင်းရှာမယ့်အစားရေရှည်အကျိုးအမြတ်မှစခွေငျးငှါအကြံပြုထားသည်။ လူကြီးတဆင့်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကိုဖြတ်ပြီး subcortical (ဥပမာ ventral striatum) နှင့် cortical (ဥပမာ prefrontal) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာခြေရာခံမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အစီရင်ခံအပြောင်းအလဲများကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဤကာလမှတိကျသောဖြစ်ကြောင်း, ဒါမှမဟုတ်တဖြည်းဖြည်းငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကအတန်ငယ် linear ပုံစံအတွက်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းရငျ့ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းရှိမရှိအပေါ်ကန့်သတ်ပေးသည် လူကြီးရန်။
အတော်ကြာအုပ်စုများမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက် (နှိုင်းယှဉ်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်များလက်ခံရရှိမှုအတွက် ventral striatum ၏ကြီးထွား activation ပြသသောပြသကြErnst, et al ။ , 2005; သွပ်ရည်စိမ်, et al ။ , 2006; Geier, Terwilliger, Teslovich, Velanova, & Luna, 2009; ဗန် Leijenhorst, Zanolie, et al ။ , 2010), လူကြီးများမှဆွေမျိုးအဆိုပါ prefrontal cortex အတွက်လျော့နည်း activation နှင့်အတူဒွန်တွဲ။ သွပ်ရည်စိမ်နှင့်သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်လူကြီးဖို့ကလေးဘဝအပြည့်အဝအကွာအဝေးကိုဖြတ်ပြီးဒီတုန့်ပြန်ဆန်းစစ်ဖို့ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုများတ6တစ်နှစ်ကြားရှိမှ 29 အတွက်ထိန်းသိမ်းရေးဆုချဖို့အမူအကျင့်များနှင့်အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကတိရစ္ဆာန်အလေ့လာမှုများ (မှာရှိတဲ့ဆုလာဘ် related သင်ယူမှုနှင့်အပြုအမူများတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရဦးနှောက် circuitry အပေါ်အာရုံစူးစိုက်Hikosaka & Watanabe, 2000; Pecina, Cagniard, Berridge, Aldridge, & Zhuang, 2003; Schultz, 2006), အရွယ်ရောက်လူ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ (ဥပမာ (Knutson, အဒမ်, Fong, & Hommer, 2001; O'Doherty, Kringelbach, Rolls, Hornak, & Andrews, 2001; Zald, et al ။ , 2004)) နှင့်စွဲလမ်း၏လေ့လာမှုများအတွက် (Hyman & Malenka, 2001; Volkow & Li, 2004) ။ ကြွက်မော်ဒယ်များ (အပျေါအခွခေံLaviola, et al ။ , 1999; လှံ, 2000) နှင့်ယခင်ပုံရိပ်အလုပ် (Ernst, et al ။ , 2005), သူတို့ကကလေးများနှင့်လူကြီးများမှဆွေမျိုး, မြီးကောင်ပေါက်ထိပ်တန်းချ prefrontal ထိန်းချုပ်မှုဒေသလျော့နည်းရင့်ကျက်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူဖျော်ဖြေပွဲအတွက် ventral striatum ၏ပုံကြီးချဲ့ activation ကိုပြသမယ်လို့တွေးဆ။ prefrontal ဒေသများတွင်လှုပ်ရှားမှုအတိုင်းအတာကလေးများပိုမိုဆင်တူခဲ့သော်လည်း၎င်းတို့၏ရလဒ်များကိုဆုချဖို့ ventral striatum အတွက်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု၏ Spatial အတိုင်းအတာကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းကဤအယူအဆထောက်ခံ, လူကြီးများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိကြောင်းဆင်တူခဲ့သည်။ အဲဒီနှစျခုဒေသများအကြားလှုပ်ရှားမှုအတိုင်းအတာကလေးများနှင့်လူကြီးများမှဆွေမျိုးမြီးကောင်ပေါက်အတွက် ventral striatum အတွက်လှုပ်ရှားမှု၏မြင့်မားသောပြင်းအားနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့မြင် (corticosubcortial ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မညီမမျှကနေရလဒ်မှယူဆ ပုံ 2) ။ လူကြီးများမှမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဆွေမျိုးအတွက် prefrontal နှင့် subcortical ဒေသများအကြားနှောင့်နှေး functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုဖေါ်ပြခြင်းမကြာမီကအလုပ် (စိတ်ခွန်အားနိုးတွေကို processing နှင့်ဆက်စပ်သောဒေသများတွင်၏ထိပ်မရှိခြင်းဆင်းထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုယန္တရားကိုထောက်ပံ့ပေးယုန်, et al ။ , 2008).
အသက်အရွယ်တစ် function ကိုအဖြစ်မျှော်လင့်ဆုလာဘ်ပေးရန် ventral striatum အတွက်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုချင်းစီတစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက်, 13 နှစ်အကြမ်းဖျင်း 18 ကြားပိုမိုလှုပ်ရှားမှုဖေါ်ပြခြင်း (ထံမှ Adapted သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2006; 2007).
ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် (ကြွက်မော်ဒယ်များနှင့်အတူအစိတ်အပိုင်းအတွက်တသမတ်တည်းများမှာLaviola, Macri, Morley-Fletcher, & Adriani, 2003) နှင့်ယခင်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ (Ernst, et al ။ , 2005; ဗန် Leijenhorst, Moore, et al ။ , 2010) ဆုလာဘ်များနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဆုလာဘ်များမျှော်လင့်ဖို့မြှင့်တင်ရန် ventral striatal လှုပ်ရှားမှုဖေါ်ပြခြင်း။ ကလေးများနှင့်လူကြီးများမှဆွေမျိုး, ဆယ်ကျော်သက်ဆုချမှထားတဲ့ပုံကြီးချဲ့ ventral striatal တုံ့ပြန်မှုပြသခဲ့သည်။ သို့သော်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်နှစ်ဦးစလုံးလူကြီးများထက် prefrontal ထိန်းချုပ်မှုဒေသများအတွက်လျော့နည်းရင့်ကျက်တုံ့ပြန်မှုပြသခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်အလှည့်ဖွံ့ဖြိုးရေး၏ဤကာလအတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိတိုးမြှင့အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်များ (ဆက်စပ်ရသောဤဒေသများများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာကလေးများသို့မဟုတ်လူကြီးများမှဆွေမျိုး, ventral striatal လှုပ်ရှားမှုအတွင်းတိုးမြှင့်အခြေခံစခွေငျးငှါအကြံပြုFigner, et al ။ , 2009) ။ ဒါဟာ (နေချိန်မှာအများအပြားဓါတ်ခွဲခန်းကိုသတိပြုပါရန်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါသည်Ernst, et al ။ , 2005; သွပ်ရည်စိမ်, et al ။ , 2006; Geier, et al ။ , 2009; Somerville, et al ။ , စာနယ်ဇင်းအတွက်; ဗန် Leijenhorst, Moore, et al ။ , 2010) မြီးကောင်ပေါက်အတွက် ventral striatum ၌ဤမြင့်တုန့်ပြန်ပြပြီ, တဦးတည်းဓာတ်ခွဲခန်း (ဒီတုန့်ပြန်သောငှာစောင့်ရှောက်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ပါသည်Bjork, et al ။ , 2004; Bjork, Smith, Chen, & Hommer, 2010) အနာဂတ်လေ့လာမှုများဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု၏ဤပုံစံသည်သို့မဟုတ်လေ့လာမဟုတ်သောအရာအောကျသတ်သတ်မှတ်မှတ်အခြေအနေများရှင်းလင်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
prefrontal နှင့် subcortical ဒေသ differential စုဆောင်းမှုဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ fMRI လေ့လာမှုအတော်များများဖြတ်ပြီးသတင်းပို့ခဲ့ကြ (ကာဇီ, သောမတ်စ်, et al ။ , 2002; Geier, et al ။ , 2009; Luna, et al ။ , 2001; ဘုန်းကြီး, et al ။ , 2003; သောမတ်စ်, et al ။ , 2004; ဗန် Leijenhorst, Zanolie, et al ။ , 2010) ။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဤသူတွေ့ရှိချက်နု prefrontal ဒေသများထက် prefrontal နှင့် subcortical ဒေသဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအကြားတစ်ဦးမညီမမျှ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အနက်ပါပြီ။ (ကွဲပြားခြားနားသောအခင်းအကျင်းအတွက်သင့်လျော်တဲ့လုပ်ရပ်တွေလမ်းညွှန်အတွက် prefrontal ဒေသသက်သေအထောက်အထားပေးထားMiller က & Cohen ကို, 2001), နု prefrontal လှုပ်ရှားမှုအနာဂတ်ရလဒ်များနှင့်အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှု၏အကဲဖြတ်၏သင့်လျော်သောခန့်မှန်းချက်သည်ဆီးတားခြင်းငှါ, နှင့်အရှင် ventral striatum ထက်ဆုလာဘ်အဘိုးပြတ်အပေါ်လျော့နည်းသြဇာဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုရေရှည်အကျိုးအမြတ်ကျော်ချက်ချင်းအားဖြင့် biased အခါဒီပုံစံ (cortical လှုပ်ရှားမှုမှဆွေမျိုး, မြင့်မားသော subcortical ဖေါ်ပြခြင်းယခင်သုတေသနနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်McClure, Laibson, Loewenstein, & Cohen, 2004) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းကလေးဘဝသို့မဟုတ်လူကြီးမှဆွေမျိုး, နု prefrontal cortex ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆုလာဘ်အဘိုးပြတ်အတွက် ventral striatum မှဆွေမျိုး prefrontal စနစ်များလျော့နည်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက်ရရှိလာတဲ့, စေ့စ့စပ်စပ် activated ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့ဒေသလုံလောက်သောအထက်မှအောက်သို့ထိန်းချုပ်မှု (ဥပမာ ventral striatum) မပေးနိုငျသညျ။
cortical နှင့် subcortical ဒေသ differential ကိုစုဆောင်းမှုစေ့စ့စပ်စပ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးဖြတ်ပြီးသတင်းပို့ထားပြီးနေစဉ်, သာအနည်းငယ်လေ့လာမှုများထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆုလာဘ်စနစ်များအပြန်အလှန်ဘယ်လိုသိမြင်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြပါပြီ။ (နေဖြင့်မကြာသေးမီကလေ့လာမှုGeier, et al ။ , 2009) သည်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအတွက် fMRI စဉ်အတွင်းတစ် antisaccade တာဝန်တစ်ခုဗားရှင်းကိုသုံးပြီးဒီအပြန်အလှန်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုပိုက်ဆံရှယ်ယာမှာထားတဲ့အဘို့အစမ်းသပ်မှုတွေပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြီးကောင်ပေါက်များတွင်ကြည့်ရှုလေ့လာအကြီးမြတ်ဆုံးတိုးမြှင့် (ပိုမြန်ပြီးပိုတိကျမှန်ကန်တုံ့ပြန်မှု) နှင့်အတူတိုးမြှင့်ခဲ့ပြသခဲ့သည်။ ဤသည်စွမ်းဆောင်ရည်သူတို့အဘို့ပြင်ဆင်နေခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် antisaccade ကွပ်မျက်ခံခဲ့ရသည်နေစဉ်နောက်တစ်နေ့ရုံးတင်စစ်ဆေးအကျိုးကိုခံရလိမ့်မယ်လို့တစ် cue အောက်ပါမြီးကောင်ပေါက်အတွက် ventral striatum အတွက်ပုံကြီးချဲ့ activation အားဖြင့် paralleled ခဲ့သည်။ မြီးကောင်ပေါက်လည်းမျက်စိလှုပ်ရှားမှုများကိုထိန်းချုပ်ဘို့အရေးကြီးသောဒေသများအတွက်မြင့်မားသော prefrontal လှုပ်ရှားမှုပြသခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်သည်ဤထိန်းချုပ်မှုဒေသများအတွက်ဆုလာဘ်-related upregulation အကြံပြုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါ Geier လေ့လာမှုမြီးကောင်ပေါက်များတွင်သိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေနိုင်သည်ကိုဘယ်လိုအစာစားချင်စိတ်တွေကိုဥပမာတစ်ခုပေးပေမယ့်နေ့တိုင်းအသက်တာ၌မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မြင့်မားအန္တရာယ်အပြုအမူအစာစားချင်စိတ်တွေကိုသိမြင်ဆုံးဖြတ်ချက်များအယှက်စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သူတို့အနေနဲ့အစာစားချင်စိတ်လူမှုရေး cue တစ်တုံ့ပြန်မှုဖိနှိပ်ခဲ့သည့်အပေါ်တစ်ဦးသွားလာရင်း / nogo တာဝန်ဖျော်ဖြေနေစဉ်ကဤယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့, Somerville နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (Somerville, et al ။ , စာနယ်ဇင်းအတွက်) ကလေးများ, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ သူမသည်ကြားနေသူမြားကိုထက်ကဤ cue ဖို့ပိုမှားယွင်းသောနှိုးစက်အားဖြင့်သက်သေအဖြစ်မြီးကောင်ပေါက်ကလေးများနှင့်လူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် သာ. ကြီးမြတ်အခက်အခဲအစာစားချင်စိတ်လူမှုရေးတွေကိုတွန်းလှန်ခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဒီအမူအကျင့်စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ ventral striatum အတွက်ပိုကောင်းလှုပ်ရှားမှုအားဖြင့် paralleled ခဲ့သည်။ ဆနျ့ကငျြဘ၌, prefrontal cortex အတွက် activation ခြုံငုံတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်အသက်အရွယ်အတွက်တိုးတက်မှုနှင့်အတူလှုပ်ရှားမှုအတွက် linear ကျဆင်းခြင်းပြသခဲ့သည်။ တစ်ဦးကအလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှု cortical နှင့် subcortical အချက်ပြမှုများများအတွက် key ကို convergence အမှတ်အဖြစ် dorsal striatum ဖော်ထုတ်လေ့လာဆန်းစစ်။ စုပေါင်းဤလေ့လာမှုများလူကြီးများအနေဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုအပြုအမူများ၏အခြေအနေတွင်အပေါ်မူတည်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အစာစားချင်စိတ်တရားစွဲဆိုအခြေအနေတွေမှာ, အစာစားချင်စိတ်တွေကိုထောက်လှမ်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက် subcortical စနစ်များ differential ကိုဒေသဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုပေး cortical ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ (ဘရိတ်) ကျော် (accelerator) ထွက်အနိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ သို့သျောလညျးအစာစားချင်စိတ်သို့မဟုတ် Emotion တွေကိုပစ္စုပ္ပန်မဟုတ်သည့်အတွက်အခြေအနေတွေမှာ, cortical ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များကိုမြီးကောင်ပေါက်၌ သာ. အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်မှဦးဆောင်ခိုးယူကြသည်မဟုတ်။
တစ်ဦးချင်းစီ Impulses သတင်းပို့ထိန်းချုပ်ဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်နှင့်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေအချို့သောအချိန်များအတွက်စိတ်ပညာအတွက်အသိအမှတ်ပြုထားပြီးတဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်း (အတွင်းကွဲပြားBenthin, Slovic, & Severson, 1993) ။ ထို့ကြောင့်အချို့သောဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်များအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပိုဖွယ်ရှိဖြစ်နှင့်ဆင်းရဲတဲ့ရလဒ်များပိုမိုကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲဆန်းစစ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဆင်းရဲသောသူတို့သည်ရလဒ်များအဘို့ သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်မှာဖြစ်စေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်တစ်ဦးချင်းစီကိုသိရှိနိုင်ဖို့အလားအလာဇီဝအပြုအမူအမှတ်အသားများကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကကူညီလိမ့်မည်။
အဆိုပါ, လူမှုရေးသိမြင်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာစာပေတွင်ဤအရည်အချင်းများအစီရင်ခံတစ်ဦးချင်းခြားနားချက်များ၏ဂန္ထဝင်ဥပမာ (ဆန္ဒပြည့်၏နှောင့်နှေး၏ဖြစ်ပါသည်Mischel, et al ။ , 1989) ။ ဆန္ဒပြည့်၏နှောင့်နှေးပုံမှန်အား3နှစ်အရွယ်ကလေးများ4အတွက်အကဲဖြတ်သည်။ အဆိုပါကလေးသည်သူတို့အခုတစ်ခုသို့မဟုတ်ကြီးမားသောဆုလာဘ် (နှစ်ခု marshmallows) အကြာတွင်သေးငယ်တဲ့ဆုလာဘ် (တဦးတည်း marshmallow) ကြိုက်တတ်တဲ့လားဟုမေးမြန်းသည်။ ကလေးသူငယ်အခထို့နောက်စမ်းသပ်မယ့်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ရန်အတွက်အခန်းတစ်ခန်းချန်ထားမည်ကြောင်းပြောသည်နှင့်သူမ၏ထိုင်ခုံ၌တည်ခြင်းနှင့်ထိုကာလအတွင်းမှာတစ်ဦး marshmallow မစားလျှင်, သူမနှစ်ဦးစလုံး၏ကြီးမားသောအကျိုးကိုခံရလတံ့သောကလေးကရှင်းပြသည်ဖြစ်ပါတယ် marshmallows ။ ကလေးသို့မဟုတ်မစောင့်နိုင်မပါဘူးဆိုရင်, သူမစမ်းသပ်ဆင့်ခေါ်ခြင်းနှင့်အားဖြင့်သေးငယ်တဲ့အကျိုးကိုခံရဖို့ခေါင်းလောင်းမြည်သင့်ပါတယ်။ ကလေးသည်တာဝန်နားလည်ရှင်းပါတယ်ပြီးတာနဲ့သူမနှစ်ဦးသည်ဆုလာဘ်နှင့်ခေါင်းလောင်းနှင့်အတူစားပွဲ၌ထိုင်သည်။ အခန်းထဲမှာအာရုံပြံ့လှငျ့မျှကစားစရာ, စာအုပ်တွေသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများနှင့်အတူလျော့ချနေကြသည်။ စမ်းသပ် 15 မိနစ်အကြာတွင်သို့မဟုတ်ကလေး, အခေါင်းလောင်းတဘက်တချက်ကတော့ဆုလာဘ်စား, သို့မဟုတ်ဒုက္ခဆင်းရဲမဆိုနိမိတ်လက္ခဏာများပြသပြီးပြန်လည်ရောက်ရှိ။ ဒီပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုပြီး Mischel ကလေးများပုံမှန်အားဖြင့်ဒီတာဝန်အပေါ်နည်းလမ်းနှစ်ခုထဲကတစ်ခုအတွက်ပြုမူကြောင်းပြသခဲ့သည်: 1) ထိုသူတို့သည်မိမိတို့တစ်ဦးတည်းသာ get ကိုဆိုလိုသည်သော marshmallow ရှိသည်နိုင်ရန်အတွက်နီးပါးချက်ချင်းခေါင်းလောင်းမြည်; 2) သူတို့စောင့်ဆိုင်းနှင့်၎င်းတို့၏အကျိုးအမြတ်ပိုကောင်းအောင်နှင့်နှစ်ဦးစလုံး marshmallows လက်ခံရရှိသည်။ ဤသည်လေ့လာရေး (အချို့တစ်ဦးချင်းစီအလွန်အမင်းအဓိကမက်လုံး၏မျက်နှာနှင့်ဤဘက်လိုက်မှုအတွက် Impulses သတင်းပို့ထိန်းချုပ်ဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်အတွက်အခြားသူများထက်ပိုကောင်းများမှာအစောပိုင်းကလေးဘဝအတွက်တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်အကြံပြုMischel, et al ။ , 1989) နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူငယ်လူကြီးတစ်လျှောက်လုံးဆက်လက်ပေါ်လာ (Eigsti, et al ။ , 2006).
အဘယ်အရာကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုအပြုအမူအတွက်တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်ကိုရှင်းပြစျနိုငျသလဲ တချို့ကသဘောတရားပညာရှင်တွေရဲ့ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့်ပတ်သက်နေ dopaminergic mesolimbic circuitry, (အန္တရာယ်များအပြုအမူအခြေခံကြောင်း postulated ပါပြီBlum, et al ။ , 2000) ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ (neurochemical သက်သေအထောက်အထား cortical နှင့် subcortical dopamine စနစ်များအကြားဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ထဲမှာချိန်ခွင်လျှာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း သာ. ကြီးမြတ် cortical dopamine အဆင့်ဆင့်ဆီသို့ပြောင်းရွှေ့ဖို့စတင်ကြောင်းညွှန်ပြပေးBrenhouse, et al ။ , 2008; လှံ, 2000) ။ အလားတူပင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကနေတဆင့် nonhuman မျောက် prefrontal cortex ၏ dopaminergic enervation တစ်ဦးနှောင့်နှေးအချိန်သင်တန်း (functional ဖြစ်စေရင့်ကျက်လူကြီးသည်အထိရောက်ရှိခဲ့သည်မဟုတ်ကြောင်းအကြံပြုလူကြီးသို့လည်းမရှိRosenberg က & Lewis က, 1995) ။ ထိုကဲ့သို့သော subcortical ဒေသများတွင်လည်းအနည်းငယ်သို့မဟုတ်လွန်း dopamine အတွက်ရရှိလာတဲ့ dopamine-related ဗီဇအတွက် allelic မျိုးကွဲ, အတိုင်းဤ circuitry အတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု, (ပိုပြီးအခြားသူများထက်အန္တရာယ်များအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တချို့၏ propensity ဆက်စပ်စေခြင်းငှါ,O'Doherty, 2004).
အဆိုပါ ventral striatum (ချက်ချင်းကြိုတင်ငွေကြေး-အန္တရာယ် Paradigm အပေါ်အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှုအောင်ဖို့လှုပ်ရှားမှုအတွင်းတိုးမြှင့်ပြသခဲ့ပြီးKuhnen & Knutson, 2005; Matthews, Simmons, Lane, & Paulus, 2004; Montague & Bern, 2002) နှင့်ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့, မြီးကောင်ပေါက် (ကလေးများသို့မဟုတ်လူကြီးများမှဆွေမျိုးရလဒ်များဆုချီးမှပုံကြီးချဲ့ striatal လှုပ်ရှားမှုပြသErnst, et al ။ , 2005; သွပ်ရည်စိမ်, et al ။ , 2006) ။ စုပေါင်းအဲဒီဒေတာ (ဆယ်ကျော်သက်အုပ်စုတစုအဖြစ်အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှုပိုမိုကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုFigner, et al ။ , 2009; Gardner & Steinberg, 2005), ဒါပေမယ့်တချို့ဆယ်ကျော်သက်အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များအဘို့အလားအလာ သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်မှာသူတို့ကိုချပြီး, အခြားသူများအန္တရာယ်များအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ထက်ပိုမိုကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။
အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေသည့်အပြုအမူအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုစူးစမ်းဖို့, သွပ်ရည်စိမ်နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2007) ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်စွန့်စားရမှုနှင့်စွန့်စားရမှုဆိုင်ရာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များနှင့်ကြီးမားသောငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်ကိုတုန့်ပြန်ခြင်းအားဖြင့်ဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်သည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာတိုက်နယ်အတွင်းရှိလှုပ်ရှားမှုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အလုပ်လုပ်သောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်နှင့်အန္တရာယ်ရှိသောအပြုအမူများ၊ စွန့်စားရမှုနှင့်စိတ်မ ၀ င်စားမှုများ၏အမည်မသိ Self- အစီရင်ခံစာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုအသက် ၇ နှစ်မှ ၂၉ နှစ်အတွင်းရှိတစ် ဦး ချင်းစီတွင်ရရှိခဲ့သည်။ ventral ကိုယ်ဝန်ဆောင်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဖြတ်ပြီးအန္တရာယ်များသောအပြုအမူများတွင်ပါဝငျ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအကြားအပြုသဘောဆက်စပ်မှုရှိခဲ့သည်။ ဤလှုပ်ရှားမှုသည်ထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူ၏မျှော်လင့်ထားသည့်အပြုသဘောဆောင်သောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးဆက်များကိုတစ် ဦး ချင်းစီ၏သတ်မှတ်ချက်၏လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ကွဲပြားသည်။ အန္တရာယ်ရှိသောအပြုအမူများကိုဆိုးရွားသည့်အကျိုးဆက်များသို့ ဦး တည်နေသည်ဟုယူမှတ်သူတစ် ဦး ချင်းသည် ventral striatum ကိုဆုချရန်သက်ဝင်လှုပ်ရှားစေခဲ့သည်။ ဤအပြုသဘောဆောင်သောပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုကလေးများပါ ၀ င်သူများကတွန်းအားပေးခဲ့သော်လည်းအရွယ်ရောက်သူများတွင်အပြုသဘောဆောင်သောပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုကိုအပြုသဘောဆောင်သည်ဟုမှတ်ယူခဲ့သည်။
circuitry ဆုချမှတာအန္တရာယ်ချိတ်ဆက်အပြင်, သွပ်ရည်စိမ် (Impulse ၏ဤ circuitry နှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၏လှုပ်ရှားမှုအကြားမျှအသင်းအဖွဲ့ပြသသွပ်ရည်စိမ်, et al ။ , 2007) ။ အဲဒီအစားသူမ Impulse အဆိုးအသက်အရွယ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ပြသခဲ့သည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်မကြာသေးခင်ကအစီရင်ခံစာနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ် Steinberg (2008) ကလေးဘဝနှင့်လူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်တိုးပွားလာရန်ကြိုးစားနေခြင်းနှင့်အတူအာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းနှင့်ထကြွလွယ်သောကွဲပြားခြားနားသောဖွံ့ဖြိုးမှုကိုပြသသော်လည်း၊ ဤတွေ့ရှိချက်များအရဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်လူတစ် ဦး ချင်းစီသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပြောင်းအလဲများကြောင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုရိုးရှင်းစွာပြောင်းလဲခြင်းထက်စွန့်စားနိုင်သောအပြုအမူများတွင်ပါ ၀ င်ရန်ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူလူတစ် ဦး ချင်းစီသည်အန္တရာယ်များသောအပြုအမူများပိုမိုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဤတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုများသည်အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များတွင်အားနည်းချက်ကိုပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောစွန့်စားမှုယူခြင်း၊
လူ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ (ပြန်လည်သုံးသပ် (corticosubcortical circuitry အတွက်အခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့အပြောင်းအလဲများပြသကာဇီ, စပါး, et al ။ , 2005; Giedd, et al ။ , 1999; Giedd, et al ။ , 1996; Jernigan, et al ။ , 1991; Sowell, et al ။ , 1999သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်)) ကြောင်းအပြိုင်တိုးနှင့် Self-စည်းမျဉ်း (ကာဇီ, Trainor, et al ။ , 1997; Luna & Sweeney, 2004; Luna, et al ။ , 2001; ရူဗျောဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့, et al ။ , 2000; Steinberg, 2004; Steinberg, et al ။ , 2008) ။ ဤအပြောင်းအလဲများ (အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပိုပြီး focal စုဆောင်းမှုမှပျံ့ထံမှ prefrontal ဒေသ activation အတွက်ပြောင်းကုန်ပြီပြသဘရောင်း, et al ။ , 2005; Bung, et al ။ , 2002; ကာဇီ, Trainor, et al ။ , 1997; Durston & Casey, 2006; မောရှေ, et al ။ , 2002) နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း subcortical ဒေသမွငျ့မားစုဆောင်းမှု (ကာဇီ, သောမတ်စ်, et al ။ , 2002; Durston & Casey, 2006; Luna, et al ။ , 2001) ။ neuroimaging လေ့လာမှုများနှင့်အဓိပ္ပါယ်ထိုကဲ့သို့သောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို၏ယန္တရားရဲ့အနှစ်သာရကမနိုင်ပေမဲ့, အသံအတိုးအကျယ်နှင့်ဖွဲ့စည်းပုံတွင်ဤအပြောင်းအလဲများကိုအတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်း, ၏သနျ့စခွေငျးငှါ, ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အတူစနစ်၏ဒဏ်ငွေ-tuning ရဲ့သဘောထားအကြံပြုချက်များရငျ့နေစဉ်ယင်းဦးနှောက်ဒေသများနှင့်ထံမှ Project (ယုန်, et al ။ , 2008; Liston, et al ။ , 2006).
အတူတူယူ, ဒီမှာဖန်တီးတွေ့ရှိချက်တိုးမြှင့်အန္တရာယ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်အပြုအမူယူပြီး subcortical စိတ်ခွန်အားနိုးနှင့် cortical ထိန်းချုပ်မှုဒေသများ၏ကွဲပြားခြားနားသောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ သို့သော်ဤမြီးကောင်ပေါက်ဆင်ခြင်တုံတရားဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချ၏နိုငျဖြစ်ကြောင်းပြောမဟုတ်ပါဘူး။ အစား, စိတ်လှုပ်ရှားမှုစွဲချက်အခြေအနေများအတွက်ပိုမိုရင့်ကျက် limbic system ကိုလုပ်ရပ်များလမ်းညွှန်အတွက် prefrontal ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အကျော်အနိုင်ရလိမ့်မည်။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဆုလာဘ်ရှာခြင်းနှင့်အန္တရာယ်အပြုအမူတွေကိုယူပြီး (ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဟာကာလအဖြစ်ခွဲခြားထားပြီးဖြစ်သော်လည်းGardner & Steinberg, 2005; လှံ, 2000) ဆုချမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု, ထိုကဲ့သို့သောစွဲ, ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်သေဆုံးမှုဆင်းရဲသောသူကဲ့သို့ရလဒ်များအဘို့ သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်မှာသူတို့ကိုချပြီး, အခြားသူများထက် ပို. အန္တရာယ်များကိုယူအချို့သောဆယ်ကျော်သက် predispose ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် Impulse နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်အပျက်သဘောအကျိုးဆက်များမှဦးဆောင် suboptimal ရွေးချယ်မှုများအတွက်လိုလားသောဆက်ဆံရေးများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအမှတ်အသားများကိုနားလည်အတွက်ယူပြီးအန္တရာယ်နှင့်ဆက်စပ်သောအမျိုးမျိုးသောတွေ့ရှိချက် synthesizing ခြင်းဖြင့်အရေးပါအခြေခံသည်။
ဤလုပ်ငန်းသည် Mortimer ဃ Sackler မိသားစု, BJC မှ NIDA R01 DA018879, NIMH P50 MH62196, တွင် NSF 06-509 နှင့်တွင် NSF 0720932 နေဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက် Dewitt-Wallace ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားခဲ့ပါတယ်, နှင့် Weill အတှကျကော်နဲလ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကောလိပ် Citigroup ဇီဝဆေးပညာ Imaging ကရေးစင်တာတို့က နှင့် Imaging က Core ။
Bjork JM, Knutson B, Fong သည် GW, Caggiano DM, Bennett က SM, Hommer DW ။ မြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာမက်လုံးပေး-ရူးနှမ်းဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်: တူညီနှင့်လူငယ်လူကြီးများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားမှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2004;24(8): 1793-1802 ။ [PubMed]
Bjork JM, Smith က AR, ချန်, G, Hommer DW ။ မြီးကောင်ပေါက်, လူကြီးများနှင့်ဆုလာဘ်: fMRI သုံးပြီးစိတ်ခွန်အားနိုး neurocircuitry စုဆောင်းမှုနှိုင်းယှဉ်။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2010;5(7): e11440 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bjorklund DF ။ ကလေးများ၏မှတ်ဉာဏ်တွင်အဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အယူအဆဆိုင်ရာဗဟုသုတ၏အခန်းကဏ္။ ။ ခုနှစ်တွင်: Brainerd CJ, Pressley M, အယ်ဒီတာများ။ မှတ်ဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်များ: သိမြင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးတသုတေသနအတွက်တိုးတက်မှု။ Springer-Verlag; နယူးယောက်: 1985 ။ စစ။ 103-142 ။
Bjorklund DF ။ အသက်အရွယ်ပြောင်းလဲခြင်းသည်ဗဟုသုတအခြေအနေတွင်ကလေးများ၏မှတ်ဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမည်သို့အထောက်အကူပြုသနည်း။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 1987;7: 993-130 ။
Blum K ကို Braverman ER, et al Holder JM, Lubar JF, Monastra VJ, Miller က: D ။ ဆုလာဘ်ချို့တဲ့ရောဂါ: ထကြွလွယ်သောစွဲလမ်းနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူများ၏ရောဂါနှင့်ကုသမှုများအတွက် biogenetic မော်ဒယ်။ J ကို Psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါး။ 2000;32(ပျော့ပျောင်း, i-ဃ): 1-112 ။
Brenhouse HC, Sonntag KC, Andersen က SL ။ prefrontal cortex projection အာရုံခံအပေါ်ယာယီ D1 dopamine အဲဒီ receptor စကားရပ်: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုတိုးမြှင့်စိတ်ခွန်အားနိုး salience မှဆက်ဆံရေးမျိုး။ J ကို neuroscience ။ 2008;28(10): 2375-2382 ။ [PubMed]
အညိုရောင် BB ။ ရွယ်တူချင်းများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဆက်ဆံရေး။ ခုနှစ်တွင်: Lerner RM, Steinberg LD, အယ်ဒီတာများ။ ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ပညာ၏လက်စွဲစာအုပ်။ ယောဟနျသ Wiley & သား, Inc; Hoboken: 2004 စစ 363-394 ။ ။
တစ်ဦး Neo-Piagetian စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်ရပ်မှန် R. အတည်ပြုခြင်း။ စမ်းသပ်ကလေးစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 1972;14: 287-302 ။
ကာဇီ BJ, Amso: D, Davidson MC ။ neuroimaging နှင့်အတူသင်ယူမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအကြောင်းကိုလေ့လာခြင်း။ ခုနှစ်တွင်: Johnson က M, Munakata Y ကို, အယ်ဒီတာများ။ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည် XXI: ဦးနှောက်နှင့်သိမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ပြောင်းလဲမှု၏လုပ်ငန်းစဉ်များ။ MIT က; ကင်းဘရစ်, MA: 2006 ။
ကာဇီ BJ, Castellanos FX, Giedd ဖြစ်မှု, နားမှာ WL, ဟမ်ဘာဂါ SD, Schubert AB, et al ။ တုန့်ပြန်တားစီးနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကို-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါ၌တရား frontostriatal circuitry ၏ဆိုလို။ J ကို Am Acad ကလေးမြီးကောင်ပေါက်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1997;36(3): 374-383 ။ [PubMed]
ကာဇီ BJ, အပြုအမူ မှစ. အခြားသောကောင်းကျိုးမှဦးနှောက်မှ Durston အက်စ်နဲ့ back: အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများကနေလေ့လာသင်ယူကြသနည်း နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006;163(6): 957-960 ။ [PubMed]
ကာဇီ BJ, Epstein ဖြစ်မှု, Buhle J ကို, Liston ကို C, Davidson MC, Tonev ST, et al ။ Frontostriatal ဆက်သွယ်မှုနဲ့ ADHD နှင့်အတူမိဘကလေး dyads အတွက်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍကို။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007;164(11): 1729-1736 ။ [PubMed]
ကာဇီ BJ, သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Hare က TA ။ သိမြင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းနှောက်အလုပ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအပြောင်းအလဲများ။ Curr Opin Neurobiol ။ 2005;15(2): 239-244 ။ [PubMed]
ကာဇီ BJ, Getz S ကိုသွပ်ရည်စိမ်အေအဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်။ dev ဗျာ 2008;28(1): 62-77 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ကာဇီ BJ, Giedd ဖြစ်မှု, သောမတ်စ် KM ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်သိမြင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးရန်၎င်း၏စပ်လျဉ်း။ Biol Psychol ။ 2000;54(1-3): 241-257 ။ [PubMed]
ကာဇီ BJ, သောမတ်စ် KM, Davidson MC, Kunz K ကို Franzen PL ။ တစ်ဦးလှုံ့ဆော်မှု-တုံ့ပြန်မှု Compatibility ကိုတာဝန်နှင့်အတူကြီးထွား striatal နှင့် hippocampal function ကို Dissociating ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2002;22(19): 8647-8652 ။ [PubMed]
ကာဇီ BJ, သောမတ်စ် KM, ဝလေ TF, Badgaiyan RD, Eccard CH, Jennings JR, et al ။ တုံ့ပြန်မှုပဋိပက္ခ, အာရုံစူးစိုက်မှုရွေးချယ်ရေးနှင့် functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်နှင့်အတူမျှော်မှန်း၏ Dissociation ။ အမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2000;97(15): 8728-8733 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ကာဇီ BJ, စပါး N ကို, မှတ်ဉာဏ်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့မော်ဒယ်ဆီသို့ Fossella ဂျေလက်တွေ့, ပုံရိပ်, တွေ့ရှိရပါသည်နှင့်မျိုးရိုးဗီဇချဉ်းကပ်။ dev Psychobiol ။ 2002;40(3): 237-254 ။ [PubMed]
ကာဇီ BJ, စပါး N ကို, Liston ကို C, Durston အက်စ် Imaging ကဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်: ငါတို့သည်သိမြင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးတအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူကြဘာလဲ? သိမှုသိပ္ပံအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 2005;9(3): 104-110 ။
Cauffman အီး, Shulman EP, Steinberg L ကို, Claus အီး, Banich MT, ဂရေဟမ်က S, et al ။ အဆိုပါအိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကိုပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအားဖြင့်ရည်ညွှန်းအဖြစ်ကိုထိခိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက်ခေတ်ကွဲပြားခြားနားမှု။ dev Psychol ။ 2010;46(1): 193-207 ။ [PubMed]
Chassin L ကို, Hussong တစ်ဦးက, Barrera M က, Jr. Molina BSG, အနားသတ်ရန် R ကို, Ritter ဂျေဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်း။ ခုနှစ်တွင်: Lerner RM, Steinberg ld, အယ်ဒီတာများ။ ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ပညာ၏လက်စွဲစာအုပ်။ ယောဟနျသ Wiley & သား, Inc; Hoboken: 2004 စစ 665-696 ။ ။
Collins AW, Laursen ခမိဘ-ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနှင့်သွဇာ။ ခုနှစ်တွင်: Lerner RM, Steinberg ld, အယ်ဒီတာများ။ ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ပညာ၏လက်စွဲစာအုပ်။ ယောဟနျသ Wiley & သား, Inc; Hoboken: 2004 စစ 331-362 ။ ။
Crone EA ၏, Donohue SE, Honomichl R ကို, Wendelken ကို C, Bung လုပ် SA ။ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အုပ်ချုပ်မှုကိုအသုံးပြုမှုကိုဖြန်ဖြေဦးနှောက်ဒေသများ။ J ကို neuroscience ။ 2006;26(43): 11239-11247 ။ [PubMed]
Crone EA ၏, ဗန် der Molen မဂ္ဂါဝပ်။ ကျောင်းနေအသက်ကြီးသောကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး: နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်အသားအရေ conduction ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထံမှသက်သေအထောက်အထား။ ကလေးသူငယ် Dev မှ။ 2007;78(4): 1288-1301 ။ [PubMed]
Dempster FN ။ အခြေခံအပြောင်းအလဲနဲ့ယန္တရားအတွက် Developmental အပြောင်းအလဲများကို: ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ဖို့ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ခုနှစ်တွင်: Howe ML, Pasnak R ကို, အယ်ဒီတာများ။ သိမြင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ထွန်းသစ်စ themes များ။ vol ။ 1 ။ Springer; နယူးယောက်: 1993 ။ စစ။ 3-27 ။
Durston က S, ကာဇီ BJ ။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူပျံ့ focal cortical လှုပ်ရှားမှုမှတစ် ဦး ကပြောင်းလဲမှု: စာရေးသူရဲ့ပြန်ကြားချက်။ Dev မှသိပ္ပံ။ 2006;9(1): 18-20 ။ [PubMed]
Durston S က, et al Davidson MC, စပါး N ကို, သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Spicer J ကို, Fossella ဂျာ။ ဖှံ့ဖွိုးတိုးနှင့်အတူ focal cortical လှုပ်ရှားမှုမှပျံ့ထံမှတစ်ဦးကပြောင်းကုန်ပြီ။ Dev မှသိပ္ပံ။ 2006;9(1): 1-8 ။ [PubMed]
Eigsti ထားတဲ့ IM, Zayas V ကို, Mischel W က, Shoda Y ကို, Ayduk အို Dadlani ကို MB, et al ။ နှောင်းပိုင်းတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူငယ်လူကြီးမှမူကြိုကနေသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးခန့်မှန်း။ Psychol သိပ္ပံ။ 2006;17(6): 478-484 ။ [PubMed]
Epstein ဖြစ်မှု, Casey BJ, Tonev ST, Davidson MC, Reiss AL, Garrett တစ်ဦးက, et al ။ ADHD- နှင့် ADHD နှင့်အတူ concordantly ထိခိုက်နစ်နာမိဘကလေး dyads အတွက်ဆေးဝါး-related ဦးနှောက်ကို Activation ဆိုးကျိုးများ။ J ကိုကလေး Psychol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007;48(9): 899-913 ။ [PubMed]
Ernst M က, Romeo RD, Andersen က SL ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လှုံ့ဆော်အပြုအမူတွေ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ Neurobiology: တစ်အာရုံကြောစနစ်များမော်ဒယ်သို့ပြတင်းပေါက်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2009;93(3): 199-211 ။ [PubMed]
Feld ဘီစီ။ သေမင်း၏တစ်ဦးကနှေးပုံစံ: ။ လြှို့ဝှကျစကားမပါဘဲဘဝထောင်ဒဏ် Juvenile များအတွက် Roper v Simmons ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဥပဒေ၊ ကျင့်ဝတ်နှင့်ပြည်သူ့ပေါ်လစီတို့၏ Notre Dame ဂျာနယ်။ 2008;22: 9-65 ။
Figner B, Mackinlay RJ, Wilkening က F, Weber နဲ့အီးယူ။ အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှုအတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေနှင့် deliberative ဖြစ်စဉ်များ: အကိုလံဘီယာကတ် Task ကိုယူအန္တရာယ်အတွက်အသက်ကွဲပြားခြားနားမှု။ J ကို Exp Psychol Mem ကို Cogn လေ့လာပါ။ 2009;35(3): 709-730 ။ [PubMed]
Flavell JH, သဲသောင်ပြင် DR, Chinksy JM ။ အသက်အရွယ်တစ် function ကိုအဖြစ်မှတ်ဉာဏ် task ထဲမှာသဘောဆောင်သောနှုတ်စမ်းလေ့ကျင့်။ ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး။ 1966;37: 283-299 ။ [PubMed]
Forbes မဂ္ဂဇင်း EE, Dahl RE ။ Pubertal ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အပြုအမူ: လူမှုရေးနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးသဘောထားတွေ၏ဟော်မုန်း activation ။ ဦးနှောက် Cogn ။ 2010;72(1): 66-72 ။ [PubMed]
သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Hare T က, Voss H ကို, ဂလိုဗာ, G, Casey BJ ။ စွန့်စားမှု-ဆည်းပူးနေနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဦးနှောက်: အန္တရာယ်မှာဘယျသူနညျး Dev မှသိပ္ပံ။ 2007;10(2): F8-F14 ။ [PubMed]
သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Hare က TA, Davidson က M, Spicer J ကို, ဂလိုဗာ, G, Casey BJ ။ လူသားတွေအတွက်ဆုလာဘ်-based သင်ယူမှုအတွက် ventral frontostriatal circuitry ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ J ကို neuroscience ။ 2005;25(38): 8650-8656 ။ [PubMed]
စမ်းသပ်လေ့လာမှု: Gardner က M, Steinberg အယ်လ်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ, စွန့်စားမှု preference ကိုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအတွက်အောင်အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု Peer ။ dev Psychol ။ 2005;41(4): 625-635 ။ [PubMed]
Geier CF, Luna ခမက်လုံးပေးအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး၏ရငျ့။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2009;93(3): 212-221 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Geier CF, Terwilliger R ကို, Teslovich T က, Velanova K သည်, Luna ခနုဆုကြေးထုတ်ယူခြင်းနဲ့ဆယ်ကျော်သက်အတွက် Inhibitory ထိန်းချုပ်ရေးအပေါ်၎င်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက်။ Cereb Cortex ။ 2009
Giedd ဖြစ်မှု။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2004;1021: 77-85 ။ [PubMed]
Giedd ဖြစ်မှု, Blumenthal J ကို, Jeffries NO, Castellanos FX, လျူ H ကို, Zijdenbos တစ်ဦးက, et al ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု: တစ် longitudinal MRI လေ့လာမှု။ နတ် neuroscience ။ 1999;2(10): 861-863 ။ [PubMed]
Giedd ဖြစ်မှု, Snell JW, Lang N ကို, Rajapakse JC, Casey BJ, Kaysen: D, et al ။ လူ့ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ quantitative သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်: အသက်အရွယ် 4-18 ။ ဦးနှောက် Cortex ။ 1996;6: 551-560 ။ [PubMed]
Gogtay N ကို, Giedd ဖြစ်မှု, Lusk L ကို, Hayashi KM, Greenstein: D, Vaituzis AC အ, et al ။ အစောပိုင်းလူကြီးတဆင့်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစဉ်အတွင်းလူ့ cortical ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ dynamic မြေပုံ။ သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ, အမေရိကန်နိုင်ငံ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2004;101(21): 8174-8179 ။
Graber ဂျာ Brooks-ဂွန်ဂျေအပျိုဖော်ဝင်။ ခုနှစ်တွင်: Blechman EA ၏, Brownell KD, အယ်ဒီတာများ။ အမူအကျင့်ဆေးဝါးနှင့်အမျိုးသမီး: တစ်ဦးကပြည့်စုံလက်စွဲစာအုပ်။ Guilford စာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်, NY: 1998 ။ စစ။ 51-58 ။
ယုန်က TA, စပါး N ကို, သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Voss Hu, ဂလိုဗာ GH, Casey BJ ။ တစ်ဦးစိတ်ပိုင်းသွားလာရင်း-nogo တာဝန်စဉ်အတွင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်စိတ်ခံစားမှု reactivity ကိုများနှင့်စည်းမျဉ်း၏ဇီဝအလွှာဟာ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008;63(10): 927-934 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Harnishfeger KK, Bjorklund DF ။ တားစီးယန္တရားများ၏ ontogeny: သိမြင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးဖို့အသစ်တဖန်ချဉ်းကပ်။ ခုနှစ်တွင်: Howe ML, Pasnek R ကို, အယ်ဒီတာများ။ သိမြင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ထွန်းသစ်စ themes များ။ vol ။ 1 ။ Springer-Verlag; နယူးယောက်: 1993 ။
Hikosaka K သည်ကွဲပြားခြားနားသောဆုလာဘ်နှင့်အတူကွဲပြားမျောက်များ၏ Orbital နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် prefrontal အာရုံခံ၏ Watanabe ကအမ်နှောင့်နှေးလှုပ်ရှားမှု။ Cereb Cortex ။ 2000;10(3): 263-271 ။ [PubMed]
Huttenlocher PR စနစ်။ လူ့တိုကျရိုကျ cortex အတွက် Synaptic သိပ်သည်းဆ - ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများနှင့်အိုမင်း၏သက်ရောက်မှုများ။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 1979;163: 195-205 ။ [PubMed]
Hyman SE, Malenka RC ။ စွဲလမ်းနှင့်ဦးနှောက်: အမလှူ၏ neurobiology နှင့်၎င်း၏ဇွဲ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2001;2(10): 695-703 ။ [PubMed]
Jernigan TL, Zisook S က, Heaton RK, Moranville JT, Hesselink JR, Braff DL ။ schizophrenia အတွက် lenticular အရေးပါနှင့်ဦးနှောက် cortex အတွက်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်မူမမှန်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1991;48(10): 881-890 ။ [PubMed]
ကယ်လီ AE, Schochet T က, Landry CF. မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေနှင့်အသစ်အဆန်းရှာ: ဗြဲတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုမှမိတ်ဆက်စကား အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2004;1021: 27-32 ။ [PubMed]
Klingberg T က, Forssberg H ကို, Westerberg အိပ်ချ်တိုကျရိုကျနှင့် parietal cortex အတွက်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစဉ်အတွင်းမှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်အလုပ်လုပ် visuospatial ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအခြေခံ။ J ကို Cogn neuroscience ။ 2002;14(1): 1-10 ။ [PubMed]
Knutson B ကိုအဒမ် CM, Fong သည် GW, တိုးပွားလာငွေကြေးဆုလာဘ်၏ Hommer ဃရှိလာရွေးချယ်နျူကလိယ accumbens စုဆောင်းလေ့ကျင့်။ J ကို neuroscience ။ 2001;21(16): RC159 ။ [PubMed]
Kuhnen CM, Knutson ခဘဏ္ဍာရေးအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ၏အာရုံကြောအခြေခံ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005;47(5): 763-770 ။ [PubMed]
Levita L ကို, Hare က TA, Voss Hu, ဂလိုဗာ, G, ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးရွှေဘောလုံး DJ သမား, Casey BJ ။ နျူကလီးယပ် accumbens ၏ bivalent ခြမ်း။ Neuroimage ။ 2009;44(3): 1178-1187 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Liston ကို C, Watts R ကို, စပါး N ကို, Davidson MC, Niogi S က, Ulug လေး, et al ။ Frontostriatal microstructure သိမြင်မှုထိန်းချုပ်အကျိုးရှိစွာစုဆောင်းမှု modulates ။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2006;16(4): 553-560 ။ [PubMed]
Luna B, Sweeney ဂျေအေ။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဦးနှောက် function ကိုပေါ်ပေါက်ရေး: တုံ့ပြန်မှုတားစီး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ FMRI လေ့လာမှုများ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2004;1021: 296-309 ။ [PubMed]
မာတင်, CA, Logan TK, Portis ကို C, Leukefeld CG, Lynam: D, Staton M က, et al ။ ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးအတွက်နီကိုတင်းကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူ testosterone ဟော်မုန်း၏အသင်းအဖွဲ့။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ 2001;26(2): 279-283 ။ [PubMed]
Matthews က SC, Simmons AN, ယာဉ်ကြော SD, Paulus အမတ်။ အန္တရာယ်-ယူပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချစဉ်အတွင်းနျူကလိယ accumbens ၏ရွေးချယ် activation ။ Neuroreport ။ 2004;15(13): 2123-2127 ။ [PubMed]
မေလ JC, Delgado MR, Dahl RE, Stenger VA သို့, ရိုင်ယန် ND, Fiez ဂျာ et al ။ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက် circuitry ၏အဖြစ်အပျက်-related အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်။ ဟားဗတ်။ 2004;55(4): 359-366 ။ [PubMed]
လူယာသည် SM, Laibson ပစ, Loewenstein, G, Cohen ကို JD ။ သီးခြားအာရုံကြောစနစ်များကိုချက်ချင်းတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်ငွေကြေးဆုလာဘ်နှောင့်နှေး။ သိပ္ပံ။ 2004;306(5695): 503-507 ။ [PubMed]
Mischel W က, Shoda Y ကို, Rodriguez MI ။ ကလေးများအတွက်ဆန္ဒပြည့်၏နှောင့်နှေး။ သိပ္ပံ။ 1989;244(4907): 933-938 ။ [PubMed]
ဘုန်းတော်ကြီး CS, လူယာ eb, နယ်လ်ဆင် EE, Zarahn အီး, Bilder RM, Leibenluff အီး, et al ။ စိတ်ခံစားမှုမျက်နှာအသုံးအနှုန်းတွေအာရုံစိုက်-related ဦးနှောက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအတွက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကျက်။ Neuroimage ။ 2003;20: 420-428 ။ [PubMed]
ဂူ PR စနစ်, Bern GS ။ အာရုံကြောဘောဂဗေဒနှင့်အဘိုးပြတ်၏ဇီဝအလွှာဟာ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2002;36(2): 265-284 ။ [PubMed]
မောရှေသည် P ကို, သမင်ဒရယ် K ကို Buxton RB, Wong က EC အ, ဖရန့် LR, သားသမီးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်ဒေသဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့၏ Stiles ဂျေ Functional MRI ။ Neuroimage ။ 2002;16(2): 415-424 ။ [PubMed]
Munakata Y ကို, Yerys BE ။ အားလုံးအတူတကွယခု: ဗဟုသုတနှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအကြား dissociations ပျောက်ကွယ်သွားသောအခါ။ Psychol သိပ္ပံ။ 2001;12(4): 335-337 ။ [PubMed]
နက်ဂျီ Z ကို, Westerberg H ကို, အဖြူရောင်အမှု Klingberg တီရင့်ကျက်ကလေးဘဝစဉ်အတွင်းသိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ J ကို Cogn neuroscience ။ 2004;16(7): 1227-1233 ။ [PubMed]
နယ်လ်ဆင် EE, Leibenluft အီး, လူယာ eb, ထင်းရူး DS ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏လူမှုရေး Re-orientation ကို: လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် psychopathology ရန်၎င်း၏စပ်လျဉ်းအပေါ်တစ်ဦးမှ neuroscience ရှုထောင့်။ Psychol Med ။ 2005;35(2): 163-174 ။ [PubMed]
O'Doherty JP ။ လူ့ ဦး နှောက်တွင်ကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့်ဆုချခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သင်ယူမှုဆု - neuroimaging မှထိုးထွင်းသိမြင်မှု။ Curr Opin Neurobiol ။ 2004;14(6): 769-776 ။ [PubMed]
O'Doherty JP၊ Kringelbach ML, Rolls ET, Hornak J, Andrews C. လူ့ orbitofrontal cortex ရှိဆုလာဘ်နှင့်ပြစ်ဒဏ်များကိုကိုယ်စားပြုသည်။ နတ် neuroscience ။ 2001;4(1): 95-102 ။ [PubMed]
Pecina S က, Cagniard B, Berridge KC, Aldridge JW, Zhuang X တို့မှာ Hyperdopaminergic Mutant ကြွက်ချိုမြိန်ဆုလာဘ်အဘို့အမြင့်မား "လို" ဘဲ "ကဲ့သို့" ရှိသည်။ J ကို neuroscience ။ 2003;23(28): 9395-9402 ။ [PubMed]
Rakic ​​P. ea အဆိုပါနှောက် cortex ၏ Synaptic ဖှံ့ဖွိုးတိုး: သင်ယူမှု, memory နဲ့စိတ်ရောဂါများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ prog ။ ဦးနှောက် Res ။ 1994;102: 227-243 ။ [PubMed]
Romeo RD ။ အပျိုဖော်ဝင်စ: neurobehavioural ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်း၏စည်းရုံးရေးနှင့်လှုပ်ရှားမှုများသက်ရောက်မှုနှစ်ဦးစလုံး၏ကာလ။ J ကို Neuroendocrinol ။ 2003;15(12): 1185-1192 ။ [PubMed]
ရူဗျောဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ K ကို Overmeyer S က, တေလာအီး, Brammer M က, Williams က SC, Simmons တစ်ဦးက, et al ။ အသက်အရွယ်နှင့်အတူ functional frontalisation: fMRI နှင့်အတူ neurodevelopmental ဘယ်နေရာတွေမှာပုံဖော်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2000;24(1): 13-19 ။ [PubMed]
Schlaggar BL, Brown က TT, သည်များ HM, Visscher KM, Miezin FM ရေ, Petersen SE ။ တစ်ခုတည်းသောစကားများအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်လူကြီးများနှင့်ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများအကြား functional neuroanatomical ကွဲပြားခြားနားမှု။ သိပ္ပံ။ 2002;296(5572): 1476-1479 ။ [PubMed]
Schultz ဒဗလျူအပြုအမူသီအိုရီနှင့်ဆုလာဘ်များ neurophysiology ။ Annu ဗြာ Psychol ။ 2006;57: 87-115 ။ [PubMed]
Scott ES ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတွင်တရားနှင့်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်။ Villanova ဥပဒေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 1992;37: 1607-1669 ။ [PubMed]
Somerville LH, Hare က TA, Casey BJ ။ Frontostriatal ရငျ့မြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာတွေကို appetitive မှသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးပျက်ကွက်ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ သိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ စာနယ်ဇင်း၌တည်၏။
Somerville LH, ဂျုံးစ် RM, Casey BJ ။ ပြောင်းလဲမှု၏တစ်ဦးကအချိန်: အစာစားချင်စိတ်မှဆယ်ကျော်သက် sensitivity ကို၏အမူအကျင့်များနှင့်အာရုံကြောဆက်စပ်နှင့်ဆန္ဒရှိသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကို။ ဦးနှောက် Cogn ။ 2010;72(1): 124-133 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Sowell ER, Peterson BS, Thompson ကလေး, SE, Henkenius AL, Toga AW မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ လူ့သက်တမ်းတစ်လျှောက် cortical ပြောင်းလဲမှုပုံဖော်။ နတ် neuroscience ။ 2003;6(3): 309-315 ။ [PubMed]
Sowell ER, Thompson ကလေး, ကေတီဟုမ်း CJ, Jernigan TL, Toga AW ။ တိုကျရိုကျနှင့် striatal ဒေသများတွင် Post-ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ရငျ့အဘို့အ Vivo သက်သေအထောက်အထားအတွက်။ နတ် neuroscience ။ 1999;2(10): 859-861 ။ [PubMed]
Sowell ER, Thompson ကလေး, Toga AW ။ အသက်တာ၏သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးလူ့ cortex အတွက်မြေပုံအပြောင်းအလဲများ။ အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်။ 2004;10(4): 372-392 ။ [PubMed]
လှံကို LP ။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ WW Norton & ကုမ္ပဏီ၊ နယူးယောက်: 2009 ။
Steinberg L ကိုအဲလ်ဘတ်က D, Cauffman အီး, Banich M က, ဂရေဟမ်က S, Woolard ဂျေခေတ်အပြုအမူနှင့် Self-အစီရင်ခံစာအားဖြင့်ရည်ညွှန်းအဖြစ်အာရုံရှာခြင်းနှင့် Impulse အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု: တစ် dual-စနစ်များမော်ဒယ်သက်သေအထောက်အထား။ dev Psychol ။ 2008;44(6): 1764-1778 ။ [PubMed]
Steinberg L, ဂရေဟမ် S, O'Brien L, Woolard J, Cauffman အီး, Banich အမ်အနာဂတ်ကွဲပြားမှုနှင့်လျှော့စျေးလျှော့အတွက်နှောင့်နှေး။ ကလေးသူငယ် Dev မှ။ 2009;80(1): 28-44 ။ [PubMed]
Tamm L ကို, Menon V ကို, Reiss AL ။ တုန့်ပြန်တားစီးနှင့်အတူဆက်နွယ်ဦးနှောက် function ကို၏ရင့်ကျက်။ J ကို Am Acad ကလေးမြီးကောင်ပေါက်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002;41(10): 1231-1238 ။ [PubMed]
သောမတ်စ် KM, Hunt က RH အ, Vizueta N ကို, Sommer T က, Durston S က, ယန် Y ကို, et al ။ သွယ်ဝိုက် sequence ကိုသင်ယူမှုအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှု၏သက်သေအထောက်အထားများ: ကလေးများနှင့်လူကြီးများတစ်ခု fMRI လေ့လာမှု။ J ကို Cogn neuroscience ။ 2004;16(8): 1339-1351 ။ [PubMed]
Turkeltaub PE, Gareau L ကို, ပန်းပွင့် DL, Zeffiro က TA ဧဒင် gf ။ စာဖတ်ခြင်းအဘို့အာရုံကြောယန္တရားများ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ နတ် neuroscience ။ 2003;6(7): 767-773 ။ [PubMed]
ဗန် Leijenhorst L ကို, Moore BG, ကအေဲနျဂြီက de Mack ZA, Rombouts လုပ် SA, Westenberg pm တွင်, Crone EA ၏။ ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချ: ဆုလာဘ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုဒေသ Neurocognitive ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ Neuroimage ။ 2010
ဗန် Leijenhorst L ကို, Zanolie K ကိုဗန် Meel CS, Westenberg pm တွင်, Rombouts လုပ် SA, Crone EA ၏။ အဘယ်အရာဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလှုံ့ဆျော? မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးဆုလာဘ် sensitivity ကိုဖြန်ဖြေဦးနှောက်ဒေသများ။ Cereb Cortex ။ 2010;20(1): 61-69 ။ [PubMed]
Volkow ND လီ TK ။ မူးယစ်ဆေးစွဲ: ကော်လံကလွဲနေတယ်သွားပြီအပြုအမူများ၏ neurobiology ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2004;5(12): 963-970 ။ [PubMed]
Windle M က, လှံ LP သို့ Fuligni AJ, Angold တစ်ဦးက, et al ဘရောင်း JD, ထင်းရူး D ကို။ အသက် 10 နှင့် 15 နှစ်အကြားဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ယန္တရားများ: အသက်မပြည့်သေးခြင်းနှင့်ပြဿနာအရက်သောက်သို့အသွင်ကူးပြောင်းမှု။ ကလေးအထူးကု။ 2008;121: S273-S289 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Zald DH, Boileau ငါ el-Dearedy W က, ဂွန် R ကို, McGlone က F, Dichter GS, et al ။ ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်တာဝန်များကိုစဉ်အတွင်းလူ့ striatum အတွက် Dopamine ဂီယာ။ J ကို neuroscience ။ 2004;24(17): 4105-4112 ။ [PubMed]